နယ်သာလန်နိုင်ငံ - ဝီကီပီးဒီးယား
(ဟော်လန်နိုင်ငံ မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
ကိုဩဒိနိတ်: 52°19′N 5°33′E﻿ / ﻿52.317°N 5.550°E﻿ / 52.317; 5.550
နယ်သာလန်နိုင်ငံ(ဒတ်ချ်: Nederland [ˈneːdərlɑnt] ( နားဆင်))သည် ဥရောပအနောက်ပိုင်းတွင်ရှိသော အဓိကတည်ရှိသော နိုင်ငံဖြစ်ပြီး ကာရစ်ဘီယံဒေသမှ နယ်မြေအစိတ်အပိုင်းအချို့နှင့် ပေါင်းစပ်ပြီး စည်းမျဉ်းခံဘုရင်စနစ်ကျင့်သုံးသည့် နယ်သာလန်ဘုရင်နိုင်ငံတော်(Kingdom of the Neltherlands)၏ အကြီးဆုံးသော နိုင်ငံဖြစ်သည်။ ထိုနယ်သာလန်နိုင်ငံကို ဟော်လန်နိုင်ငံဟု တရားဝင်မဟုတ်သော အသုံးရှိသည်။ ဥရောပတွင် ပြည်နယ် ၁၂ ခု ပါဝင်ပြီး အရှေ့ဘက်တွင် ဂျာမနီနိုင်ငံ၊ တောင်ဘက်တွင် ဘယ်လ်ဂျီယမ်နိုင်ငံနှင့် အနောက်မြောက်တွင် မြောက်ပင်လယ်တို့နှင့် ထိစပ်နေပြီး မြောက်ပင်လယ်ရှိ ရေပြင်နယ်နိမိတ်သည် ထိုနိုင်ငံတို့နှင့်အပြင် ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းနှင့်ပါ ထိစပ်၍နေသည်။
ဆောင်ပုဒ်: "Je maintiendrai" (ပြင်သစ်)
နိုင်ငံတော် သီချင်း: "Wilhelmus" (ဒတ်ချ်)
ဥရောပတိုက်အတွင်း နယ်သာလန်နိုင်ငံ၏ တည်နေရာ (အစိမ်းရင့်ရောင်)
– ဥရောပတိုက်အတွင်း (အစိမ်းရောင် နှင့် မီးခိုးရင့်ရောင်)
– ဥရောပသမဂ္ဂတွင် (အစိမ်းရောင်)
ကာရစ်ဘီယံ နယ်သာလန်၏ တည်နေရာ (အစိမ်းရောင်)
၇.၉% အခြားသောဥရောပသားများ[မှတ်စု ၄]
—၃.၄% အခြား ခရစ်ယာန်
ပြည်ထောင်စု ပါလီမန်စနစ် စည်းမျဉ်းခံဘုရင်စနစ်
ဇူလိုင်လ ၂၆ ရက် ၁၅၈၁ ခုနှစ်
ဇန်နဝါရီလ ၃၀ရက် ၁၆၄၈ခုနှစ်
• ဘုရင့်နိုင်ငံ ထူထောင်ခြင်း
မတ်လ ၁၆ ရ၈် ၁၈၁၅ ခုနှစ်
မေလ ၅ ရက် ၁၉၄၅ ခုနှစ်
• ကုလသမဂ္ဂသို့ ဝင်ခွင့်ရခြင်း
ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ၁၉၄၅ ခုနှစ်
• ဘုရင့်နိုင်ငံ ဖွဲ့စည်းခြင်း
ဒီဇင်ဘာလ ၁၅ ၁၉၅၄ ခုနှစ်
• ကာရစ်ဘီယံဒေသအား သိမ်းသွင်းခြင်း
အောက်တိုဘာလ ၁၀ ၂၀၁၀ ခုနှစ်
၄၁,၈၆၅ စတုရန်း ကီလိုမီတာ  (အဆင့်: ၁၃၁)
ဖော်ပြချက် အမှား - နားမလည်သော ပုဒ်ဖြတ် စာလုံး "၁"။ (အဆင့် - ၆၇)
၄၂၃/km2 (၁,၀၉၅.၆/sq mi) (အဆင့် - ၁၆)
$၁.၀၅၅ ထရီလီယံ (အဆင့် - ၂၇)
$၆၀,၄၆၁ (အဆင့် - ၁၁)
$၁.၀၁၂ ဘီလီယံ (အဆင့် - ၁၇)
$၅၈,၀၀၃ (အဆင့် - ၁၂)
ယူရို (€, EUR)
အမေရိကန်ဒေါ်လာ ($, USD)[မှတ်စု ၅]
UTC−4 (AST)[မှတ်စု ၆]
Note: Even though the European Netherlands are located within the UTC±0 longitudes, the country adopted UTC+1 (Central European Time) as its standard time under German occupation on2November 1942, witha+0:40:28 offset (+1:40:28 during DST) from Amsterdam’s Local Mean Time (UTC+0:19:32).
+၃၁၊ +၅၉၉[မှတ်စု ၇]
.nl, .bq[မှတ်စု ၈]
၄.၁ အုပ်ချုပ်ရေး ဒေသများ
၄.၂ နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေး
၅.၂ စိုက်ပျိုးမွေး‌မြူရေးနှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်များ
၅.၃.၂ အများပြည်သူဆိုင်ရာ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး
၅.၃.၄ ​ရေ​ကြောင်း သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး
၅.၃.၅ လေကြောင်း သယ်ယူ​ပို့​ဆောင်​ရေး
၆.၄ ကျန်းမာရေး ​စောင့်​​ရှောက်မှု
၇.၁ အနုပညာ၊ ဒဿနိကဗေဒနှင့် စာပေ
၇.၂ ဒတ်ချ်လူမျိုးနှင့် ဂေဟဗေဒစနစ်
၇.၄ ရုပ်ရှင်နှင့် ရုပ်မြင်သံကြား အစီအစဉ်
ထူးဆန်းအံ့ဩဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်ပင် နယ်သာလန်နိုင်ငံ၏ များစွာသော မြေမျက်နှာပြင် အစိတ်အပိုင်းတို့သည် ဆက်စပ်လျက် ရှိသော မြောက်ပင်လယ်ပြင်အောက် ပေ ၂၀ ခန့်နိမ့်ကျလျက်ရှိသည်။ ယင်းသို့ ပင်လယ် ရေမျက်နှာပြင်အောက် နိမ့်ကျနေသောကြောင့် နယ်သာလန်နိုင်ငံသားတို့သည် အမြဲတစေ ပင်လယ်ပြင်နှင့် ခုခံစစ်ပွဲ ဆင်နွှဲနေရသော တပ်သားများ ဖြစ်လာရလေသည်။ ထာဝစဉ်တိုက်ပွဲဝင်နေရသော တပ်သားများ ဖြစ်သည့်အလျောက် နယ်သာလန်နိုင်ငံသားတို့သည် ထကြွလုံ့လဥဿဟနှင့် ပြည့်စုံကုံလုံသော အမျိုးသားများဖြစ်လေသည်။ နိုင်ငံသားတို့၏ လုံ့လစွမ်းပကားကြောင့် နယ်သာလန်နိုင်ငံသည် သေးငယ်သော နိုင်ငံဖြစ်လင့်ကစား နိုင်ငံများအလယ်တွင် ထည်ဝါစွာ ရပ်တည်နိုင်ခဲ့ပေသည်။
နယ်သာလန်နိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားတို့သည် မိမိတို့ မှီတင်းနေထိုင်ရာ မြေနိမ့်ပိုင်းသို့ ပင်လယ်မှရေများ စီးဝင်မလာစေရန်၊ နည်းအသွယ်သွယ်ဖြင့် ကြိုးပမ်းတကုတ် အားထုတ်ကြရသည်။ ဒိုက်ခေါ် ပေ ၂၀၀၊ ၃၀၀ မျှ ထုထည်ရှိ၍ မြင့်မားလှသော ပင်လယ်ရေကာတာကြီးများကို ခိုင်မာစွာ ဆောက်လုပ်ရ၏။ မြေနိမ့်မှရေများကို လေရဟတ်များဖြင့် အဆင့်ဆင့်သယ်ဆောင်ကာ ပင်လယ်တွင်းသို့ ထုတ်ယူသွင်းပစ်ရ၏။ သို့ဖြစ်ရကား နယ်သာလန်နိုင်ငံကမ်းခြေတလျှောက်ရှိ မြို့ရွာများတွင် လေရဟတ်ကြီးငယ်များဖြင့် ပြည့်နှက်လျက် ရှိပေသည်။ ထိုလေရဟတ်များသည်ပင် နယ်သာလန်နိုင်ငံ၏ ကိုယ်ပိုင်အမှတ်အသားတခု ဖြစ်လာခဲ့သည်။
လေရဟတ်ငယ်ကလေးများသည် နေ့ရောညဉ့်ပါ လည်ပတ်၍ မြေနိမ့်ပိုင်းမှ ရေကိုတူးမြောင်းငယ်များသို့ ပို့ဆောင်ပေး၏။ တူးမြောင်းငယ်များမှ ရေကို တူးမြောင်းကျယ်ကြီးများသို့ လေရဟတ်ကြီးများ၊ လျှပ်စစ်မိုတာများ၊ ဒီဇယ်အင်ဂျင်စက်များဖြင့် ပို့ဆောင်ကာ ပင်လယ်ထဲသို့ ရေကို ထုတ်ပစ်ရလေသည်။ တခါတရံ မုန်တိုင်းထန်သောအခါ လှိုင်းလုံးကြီးများသည် ကြီးမားသောအရှိန်ဖြင့် တူးမြောင်းကြီးများမှ ရေကို လာလမ်းသို့ တွန်းပစ်တတ်၏။ ယင်းသို့သောဝီရိယလုံ့လဖြင့် ပင်လယ်ရေနှင့် အစဉ်စစ်ခင်းနေသည့် အခိုက်မှာပင် ပင်လယ်ရေလွှမ်းမိုးသော အဖြစ်မျိုးကိုလည်း ကြုံတွေ့ရသေး၏။ ၁၉၅၃ ခုနှစ်တွင် ရေလွှမ်းမိုး၍ အကြီးအကျယ်ပျက်စီးခဲ့ရသည်။
နယ်သာလန်နိုင်ငံတွင် ပြည်နယ် ၁၂ ခုခွဲခြားထားပြီး ၎င်းပြည်နယ်တခုစီသည် ဘုရင့်ကော်မရှင်နာမင်းကြီး (Commissaris van de Koning)၏ လက်အောက်တွင်ရှိသည်။ တရားဝင်အသုံးအနှုန်းမဟုတ်သော်လည်း လင်းဘာ့ဂ်ပြည်နယ်တွင် ထိုရာထူးနေရာအား ဘုရင်ခံ(Gouverneur)ဟုလည်း သုံးနှုန်းသည်။ ပြည်နယ်အားလုံးကို မြူနီစပါယ်ဒေသများအဖြစ် ခွဲခြားထားပြီး ဒေသ ၃၅၅ ခု (၂၀၁၉) ရှိသည်။
နိုင်ငံကို ရေထုခရိုင် ၂၁ ခု(၂၀၁၈ ခုနှစ်အရ) ခွဲခြားထားပြီး ရေထုဆိုင်ရာ ဘုတ်အဖွဲ့အစည်း(waterschap or hoogheemraadschap) မှ အုပ်ချုပ်ပြီး ရေကြောင်းနှင့်ဆိုင်သော ကိစ္စရပ်များအား စီမံကွပ်ကဲမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာတည်ရှိသည်။ ရေထုဆိုင်ရာ ဘုတ်အဖွဲ့အစည်း၏ နိုင်ငံတော်တည်ရှိမှုထက်ပင် စော၍နေပြီး ပထမဆုံးပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်မှာ ၁၁၉၆ ခုနှစ်ကတည်းကပင်ဖြစ်သည်။ ဒတ်ချ် ရေထုဆိုင်ရာ ဘုတ်အဖွဲ့အစည်းသည် သက်တမ်းအရင့်ဆုံးသော ဒီမိုကရေစီနည်းကျ အဖွဲ့အစည်းများတွင် ယနေ့ထက်တိုင် ကမ္ဘာပေါ်၌ ဆက်လက်တည်ရှိနေသော အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။ ရေထုဆိုင်ရာ ဘုတ်အဖွဲ့အစည်း၏ တိုက်ရိုက်ရွေးကောက်တင်မြှောက်မှုကို လေးနှစ်လျှင် တစ်ကြိမ်ကျင်းပသည်။
Bonaire, Sint Eustatius နှင့် Saba ကျွန်းများ၏ အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းကို ကာရစ်ဘီယံနယ်သာလန်(Caribbean Netherlands) ဟုခေါ်ပြီး ပြည်နယ်၁၂ ခု၏ ပြင်ပတွင် တည်ရှိသည်။ ထိုကျွန်းများအား openbare lichamen (public bodies) ဟုသော အမည်နာမရှိပြီး နယ်သာလန်နိုင်ငံတွင် ဤအုပ်ချုပ်မှုဒေသများကို အထူးမြုနီစပယ်ဒေသဟုလည်း တခါတရံ၌ ရည်ညွှန်းကြသည်။
နယ်သာလန်နိုင်ငံတွင် ဘယ်လ်ဂျီယမ်နိုင်ငံအတွင်းသို့ ဝင်ရောက်တည်ရှိနေသော နယ်မြေအများအပြားရှိပြီး ထိုနယ်မြေများသည် မြောက်ဘရာဘန့်ပြည်နယ်၏ အစိတ်အပိုင်းများ ဖြစ်ကြသည်။ နယ်သာလန်နှင့် ဘယ်လ်ဂျီယမ်နိုင်ငံတို့သည် Benelux နှင့် မကြာသေးမီက Schengen Area ထဲတွင်ပါဝင်ကြပြီး နိုင်ငံနှစ်ခုလုံးမှ နိုင်ငံသားအသီးသီးသည် ထိုနယ်မြေများတွင် ထိန်းချုပ်မှုမရှိပဲ သွားလာနိုင်သည်။
Drenthe Assen Emmen 7009268000000000000♠၂,၆၈၀ km2 (၁,၀၃၀ sq mi) 7009263400000000000♠၂,၆၃၄ km2 (၁,၀၁၇ sq mi) 493,449 6996188000000000000♠၁၈၈/km2 (၄၉၀/sq mi)
Flevoland Lelystad Almere 7009241300000000000♠၂,၄၁၃ km2 (၉၃၂ sq mi) 7009141300000000000♠၁,၄၁၃ km2 (၅၄၆ sq mi) 422,202 6996299000000000000♠၂၉၉/km2 (၇၇၀/sq mi)
Friesland Leeuwarden 7009574900000000000♠၅,၇၄၉ km2 (၂,၂၂၀ sq mi) 7009332400000000000♠၃,၃၂၄ km2 (၁,၂၈၃ sq mi) 649,988 6996196000000000000♠၁၉၆/km2 (၅၁၀/sq mi)
Gelderland Arnhem Nijmegen 7009513600000000000♠၅,၁၃၆ km2 (၁,၉၈၃ sq mi) 7009496700000000000♠၄,၉၆၇ km2 (၁,၉၁၈ sq mi) 2,084,478 6996419999999999999♠၄၂၀/km2 (၁,၁၀၀/sq mi)
Groningen Groningen 7009296000000000000♠၂,၉၆၀ km2 (၁,၁၄၀ sq mi) 7009232500000000000♠၂,၃၂၅ km2 (၈၉၈ sq mi) 585,881 6996252000000000000♠၂၅၂/km2 (၆၅၀/sq mi)
Limburg Maastricht 7009221000000000000♠၂,၂၁၀ km2 (၈၅၀ sq mi) 7009214800000000000♠၂,၁၄၈ km2 (၈၂၉ sq mi) 1,118,223 6996521000000000000♠၅၂၁/km2 (၁,၃၅၀/sq mi)
North Brabant 's-Hertogenbosch Eindhoven 7009508200000000000♠၅,၀၈၂ km2 (၁,၉၆၂ sq mi) 7009490800000000000♠၄,၉၀၈ km2 (၁,၈၉၅ sq mi) 2,562,566 6996523000000000000♠၅၂၃/km2 (၁,၃၅၀/sq mi)
North Holland Haarlem Amsterdam 7009409200000000000♠၄,၀၉၂ km2 (၁,၅၈၀ sq mi) 7009266200000000000♠၂,၆၆၂ km2 (၁,၀၂၈ sq mi) 2,877,909 6997108199999999999♠၁,၀၈၂/km2 (၂,၈၀၀/sq mi)
Overijssel Zwolle Enschede 7009342100000000000♠၃,၄၂၁ km2 (၁,၃၂၁ sq mi) 7009332300000000000♠၃,၃၂၃ km2 (၁,၂၈၃ sq mi) 1,162,215 6996350000000000000♠၃၅၀/km2 (၉၁၀/sq mi)
South Holland The Hague Rotterdam 7009341900000000000♠၃,၄၁၉ km2 (၁,၃၂၀ sq mi) 7009281400000000000♠၂,၈၁၄ km2 (၁,၀၈၆ sq mi) 3,705,625 6997131700000000000♠၁,၃၁၇/km2 (၃,၄၁၀/sq mi)
Utrecht Utrecht 7009144900000000000♠၁,၄၄၉ km2 (၅၅၉ sq mi) 7009138000000000000♠၁,၃၈၀ km2 (၅၃၀ sq mi) 1,353,596 6996980999999999999♠၉၈၁/km2 (၂,၅၄၀/sq mi)
Zeeland Middelburg 7009293400000000000♠၂,၉၃၄ km2 (၁,၁၃၃ sq mi) 7009178300000000000♠၁,၇၈၃ km2 (၆၈၈ sq mi) 383,689 6996216000000000000♠၂၁၆/km2 (၅၆၀/sq mi)
7010415450000000000♠၄၁,၅၄၅ km2 (၁၆,၀၄၁ sq mi)
7010334810000000000♠၃၃,၄၈၁ km2 (၁၂,၉၂၇ sq mi)
6996521000000000000♠၅၂၁/km2 (၁,၃၅၀/sq mi)
တမ်းပလိတ်:နိုင်ငံ စာရင်းအင်း Bonaire Bonaire Kralendijk 7008294000000000000♠၂၉၄ km2 (၁၁၄ sq mi) 20,104 6995690000000000000♠၆၉/km2 (၁၈၀/sq mi)
တမ်းပလိတ်:နိုင်ငံ စာရင်းအင်း Saba Saba The Bottom 7007130000000000000♠၁၃ km2 (၅.၀ sq mi) 1,915 6996148000000000000♠၁၄၈/km2 (၃၈၀/sq mi)
တမ်းပလိတ်:နိုင်ငံ စာရင်းအင်း Sint Eustatius Sint Eustatius Oranjestad 7007210000000000000♠၂၁ km2 (၈.၁ sq mi) 3,138 6996150000000000000♠၁၅၀/km2 (၃၉၀/sq mi)
7008328000000000000♠၃၂၈ km2 (၁၂၇ sq mi)
6995770000000000000♠၇၇/km2 (၂၀၀/sq mi)
သမိုင်းတွင် ဒတ်ချ်နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒကို ဘက်မလိုက်မူဝါဒဟု ဖော်ပြနိုင်သည်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှစ၍ နယ်သာလန်နိုင်ငံသည် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်း အများအပြားတွင် အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်၍ လာခဲ့ပြီး အရေးပါထင်ရှားသော အဖွဲ့အစည်းများမှာ ကုလသမဂ္ဂ၊ နေတိုးနှင့် ဥရောပသမဂ္ဂတို့ဖြစ်သည်။ ဒတ်ချ်စီးပွားရေးသည် အလွန်ပွင့်လင်းမြင်သာပြီး နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်ရေးကို ကြီးစွာ မှီတည်နေသည်။
နယ်သာလန်နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒသည် အခြေခံကတိကဝတ် ၄ ခုဖြစ်သော အတ္တလန်တစ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု(Atlanticism)၊ ဥရောပ ပေါင်းစည်းမှု(European integration)၊ နိုင်ငံတကာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ နိုင်ငံတကာ ဥပဒေတို့တွင် အခြေတည်သည်။ နယ်သာလန်နိုင်ငံနှင့် စပ်လျဉ်း၍ နိုင်ငံတကာ အငြင်းပွားဖွယ် အကြောင်းအရာမှာ ဆေးခြောက်အပျော့စားနှင့်ပတ်သက်သော လွတ်လပ်ခွင့် မူဝါဒဖြစ်သည်။
ဒတ်ချ်ရွှေခေတ်နှင့် ထိုအလွန်ကာလများတွင် ဒတ်ခ်ျလူမျိုးတို့သည် စီးပွားရေးနှင့် ကိုလိနီ အင်ပါယာများကို တည်ဆောက်ခဲ့ကြသည်။ အရေးကြီးဆုံးသော ကိုလိုနီနယ်များမှာ ယနေ့ခေတ် ဆူရီနမ်နှင့် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတို့ဖြစ်သည်။ အင်ဒိုနီးရှားသည် အင်ဒိုနီးရှား အမျိုးသားတော်လှန်ရေးအပြီး လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲများ၊ နိုင်ငံတကာ ဖိအားများနှင့်ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီ၏ ဖြေရှင်းချက်များကြောင့် လွတ်လပ်ရေးရရှိလာခဲ့သည်။ ဆူရီနမ်သည် ၁၉၇၅ ခုနှစ်တွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိခဲ့သည်။ ကိုလိုနီခေတ် အတိတ်၏ ကောင်းမွေဆိုးမွေတို့သည် သမိုင်းနှင့်ဆက်နွယ်နေရာ အတိတ်သမိုင်းတို့သည် နယ်သာလန်နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေးကို ယခုထက်တိုင် လွှမ်းမိုးထားဆဲဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် ထိုနိုင်ငံတို့မှ လူအများအပြားသည် နယ်သာလန်နိုင်ငံတွင် အမြဲတမ်းနေထိုင်သူများအဖြစ် နေထိုင်ကြသည်။
နယ်သာလန်နိုင်ငံသည် ဥရောပတွင် သက်တမ်းအရင့်ဆုံး စစ်တပ်ရှိသည့် နိုင်ငံများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပြီး ပထမဆုံး တည်ထောင်ခဲ့သည်မှာ ၁၅၀၀ ခုနှစ်များနှောင်းပိုင်း Maurice of Nassau လက်ထက်ကဖြစ်သည်။ ဒတ်ချ်တပ်​မ​တော်ကို ဒတ်ချ်အင်ပါယာ ကာလတစ်​လျှောက် အသုံးပြုခဲ့သည်။ နပိုလီယံကို စစ်ရှုံးပြီးနောက်ပိုင်း ဒတဒတ်ချ်တပ်မတော်ကို စစ်မှုမထမ်းမနေရ တပ်မတော်အဖြစ် အသွင်ပြောင်းလဲခဲ့ကြသည်။ ထိုတပ်အား ဘယ်လဂျီယမ်တော်လှန်ရေးကာလတွင် မောင်မြင်စွာ တပ်ဖြန့်နိုင်ခြင်း မရှိခဲ့ပေ။ ၁၈၃၀ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းတွင် အဓိကအားဖြင့် ဒတ်ချ်ကိုလိုနီနယ်များတွင် တပ်ဖြန့်ထားခဲ့ပြီး ပထမကမ္ဘာစစ်အပါအဝင် ဥရောပစစ်ပွဲများတွင် မပါဝင်တော့ပဲ ဘက်မလိုက်မူဝါဒကို ကျင့်သုံးခဲ့ရာ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်း ၁၉၄၀ ခုနှစ် မေလတွင် နယ်သာလန်နိုင်ငံအား ကျူးကျော်စီးနင်းမှာသာ စစ်ထဲသို့ပါဝင်ခဲ့ပြီး ရှုံးနိမ့်ခဲ့သည်။
၁၉၄၈ ခုနှစ်တွင် နယ်သာလန်နိုင်ငံသည် ဘက်မလိုက်မူကို စွန့်ခဲ့ပြီး ဘရပ်ဆဲစာချုပ်(Treaty of Brussels)တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီး ၁၉၄၉ ခုနှစ်တွင် နေတိုးအဖွဲ့၏ တည်ထောင်သူ အဖွဲ့ဝင် ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ဒတ်ချ်တပ်မတော်သည် နေတိုးအဖွဲ့၏ အင်အားတရပ်ဖြစ်ခဲ့ပြီး စစ်အေးကာလအတွင်း ဂျာမနီနိုင်ငံတွင် များစွာသော အခြေစိုက်စခန်းများတွင် တပ်ဖြန့်ထားရှိခဲ့သည်။ ကိုရီးယား စစ်ပွဲအတွင်း ဒတ်ချ်စစ်သား ၃,၀၀၀ ထောင်ကျော်သည် အမေရိကန်တပ်မတော်၏ အမှတ် ၂ ခြေလျင်တပ်မ (2nd Infantry Division) တွင် တာဝန်ပေးခြင်း ခံခဲ့ရသည်။ ၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင် စစ်မှုမထမ်းမနေရ ဥပဒေကို ရုပ်သိမ်းခဲ့ပြီး ဒတ်ချ်တပ်မ​တော်သည် ပ​ရော်ဖက်ရှင်နယ် တပ်မ​တော်တစ်ရပ်အဖြစ်သို့ ကူး​​ပြောင်းခဲ့သည်။ ၁၉၉၀ ခုနှစ်များမှကတည်းက ဒတ်ချ်တပ်မ​တော်သည် ​ဘောစနီးယားစစ်ပွဲနှင့် ကိုဆိုဗိုစစ်ပွဲများ၊ ဆက်ဒမ်ဟူစိန် စစ်ရှုံးပြီး​နောက် အီရတ်ရှိ ပြည်နယ်တစ်ခုတွင် တပ်စွဲထိန်းချုပ်ထားခြင်း၊ အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံတွင် တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းတို့တွင် ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့သည်။
တပ်မတော်ကို အခွဲ ၄ ခုဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပြီး ရှေ့တွင် ကနဦးစာလုံး Koninklijke (တော်ဝင်)ဖြင့် စတင်ထားသည်:
Koninklijke Marine (KM)၊ နယ်သာလန် တော်ဝင် ရေတပ်မတော်၊ ရေကြောင်းဆိုင်ရာ လေယာဉ်များနှင့် ရေကြောင်းဆိုင်ရာ တပ်ဖွဲ့ဝင်များ ပါဝင်သည်။
Koninklijke Landmacht (KL)၊ နယ်သာလန် တော်ဝင် ကြည်းတပ်မတော်၊
Koninklijke Luchtmacht (KLu)၊ နယ်သာလန် တော်ဝင် လေတပ်မတော်၊
Koninklijke Marechaussee (KMar), the Royal Marechaussee (Military Police)၊ တော်ဝင်ရဲတပ်ဖွဲ့၊ တပ်မတော်ရဲများနှင့် နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့များ ပါဝင်သည်။
ရေငုပ်သင်္ဘောတပ်ဖွဲ့နှင့်သက်ဆိုင်သော တာဝန်များကို အမျိုးသမီးများအတွက် ခွင့်ပြုခဲ့သည်မှာ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်နေ့မှ ဖြစ်သည်။ နယ်သာလန်တပ်မတော်၏ အထူးတပ်ဖွဲ့(Korps Commandotroepen)တွင် အမျိုးသမီးများအား ခွင့်ပြုထားသော်လည်း ကနဦးလေ့ကျင့်ရေးများတွင် အလွန်ပြင်းထန်သော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များကြောင့် အမျိုးသမီးတစ်ဦးအတွက် အထူးတပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်နိုင်ရန် မဖြစ်နိုင်သလောက်ရှိသည်။ ဒတ်ချ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတွင် ဝန်ထမ်း ၇၀,၀၀၀ ကျော် ခန့်အပ်ထားပြီး ၂၀,၀၀၀ ကျော်မှာ အရပ်သားများ ဖြစ်ပြီး၅၀,၀၀၀ ကျော်မှာ တပ်မတော်သားများ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဧပြီလတွင် အစိုးရသည် အစိုးရအသုံးစရိတ်များ ဖြတ်တောက်သည့်အတွက် စစ်သုံးစရိတ်များကို အကြီးအကျယ်လျော့ချမည့်အကြောင်း ကြေညာခဲ့ရာ ထို့အထဲတွင် တင့်၊ တိုက်လေယာဉ်၊ သင်္ဘောနှင့် အကြီးတန်းတပ်မတော်အရာရှိများ လျော့ချရေးတို့ပါဝင်သည်။
နယ်သာလန်နိုင်ငံသည် စစ်ဥပဒေနှင့်ပတ်သက်သော နိုင်ငံတကာ သဘောတူညီချက်များတွင် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ သို့သော် နျူးကလီယားလက်နက်လျော့ချရေးနှင့် ပတ်သက်သော ကုလသမဂ္ဂ စာချုပ်ကို လက်မှတ်မရေးထိုးရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
နယ်သာလန်နိုင်ငံတွင် ဖွံ့ဖြိုးပြီး စီးပွားရေးရှိပြီး ရာစုနှစ်များစွာကြာအောင် ဥရောပစီးပွားရေး၏ အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။ ၁၆ ရာစုမှစ၍ သင်္ဘောလုပ်ငန်း၊ ငါးလုပ်ငန်း၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ကုန်သွယ်မှုနှင့် ဘဏ်လုပ်ငန်းများသည် ဒတ်ချ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၏ အဓိကအစိတ်အပိုင်းများဖြစ်ကြသည်။ နယ်သာလန်နိုင်ငံတွင် မြင့်မားသောအဆင့်ရှိသော စီးပွားရေးလွတ်လပ်ခွင့်ရှိသည်။ Global Enabling Trade Report(2nd in 2016) အစီရင်ခံစာတွင် ထိပ်ဆုံးနိုင်ငံထဲမှ တစ်နိုင်ငံဖြစ်ပြီး Swiss International Institute for Management Development ၏ ၂၀၁၇ ခုနှစ်စာရင်းအရ စီးပွားရေးဆိုင်ရာယှဉ်ပြိုင်နိုင်မှု၌ ကမ္ဘာပေါ်တွင် အဆင့် ၅ တွင်ရှိသော နိုင်ငံဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် နယ်သာလန်နိုင်ငံသည် 2018 Global Innovation Index ၏ညွှန်းကိန်းများအရ ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဒုတိယမြောက် တီထွင်ဆန်းသစ်မှုအရှိဆုံးသော နိုင်ငံဖြစ်သည်။
၂၀၁၆ ခုနှစ် စာရင်းများအရ နယ်သာလန်နိုင်ငံ၏ အဓိကကုန်သွယ်ဖက်နိုင်ငံများမှာ ဂျာမနီနိုင်ငံ၊ ဘယ်လ်ဂျီယမ်နိုင်ငံ၊ ယူနိုက်တက် ကင်းဒမ်း၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ပြင်သစ်၊ အီတလီ၊ တရုတ်နှင် ရုရှားနိုင်ငံတို့ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် နယ်သာလန်နိုင်ငံသည် ကမ္ဘာ့ပို့ကုန်ထိပ်သီး ၁၀ နိုင်ငံတွင်လည်း ပါဝင်သော နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်သည်။ စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းသည် ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း၏ အကြီးမားဆုံးသော အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပြီး အခြားသော အဓိကကုန်ထုတ်စက်မှုလုပ်ငန်းများမှာ ဓာတုပစ္စည်းလုပ်ငန်း၊ သတ္တုလုပ်ငန်း၊ စက်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းလုပ်ငန်း၊ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းလုပ်ငန်း၊ ကုန်သွယ်မှု၊ ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ခရီသွားလုပ်ငန်းတို့ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတကာတွင် ကုမ္ပဏီခွဲများထားရှိလုပ်ဆောင်နေသော ဒတ်ချ်ကုမ္ပဏီများကို ဥပမာအဖြစ် ထုတ်နှုတ်ပြရလျှင် Randstad၊ Unilever၊ Heineken၊ KLM၊ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများတွင် ING၊ ABN AMRO၊ Rabobank၊ ဓာတုပစ္စည်းလုပ်ငန်းများတွင် DSM, AKZO၊ ရေနံသန့်စင်မှုလုပ်ငန်းများတွင် Royal Dutch Shell၊ အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းတွင် Philips၊ ASML၊ ဂြုဟ်တုဖြင့် သွားလာမှုညွှန်ပြသော ကုမ္ပဏီအဖြစ် Tom Tom တို့ဖြစ်ကြသည်။
နယ်သာလန်နိုင်ငံသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ၁၇ နိုင်ငံမြောက် အကြီးဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှိသော နိုင်ငံဖြစ်ပြီး နိုင်ငံသားတစ်ဦးချင်းအလိုက် GDP တွင်လည်း ၁၀ နိုင်ငံမြောက် အမြင့်ဆုံးသော နိုင်ငံဖြစ်သည်။ ၁၉၉၇ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၀ ခုနှစ်အကြားတွင် နှစ်စဉ်စီးပွားရေးတိုးတက်မှု(GDP)သည် ပျမ်းမျှအားဖြင့် ၄% နီးပါးရှိပြီး ဥရောပပျမ်းမျှရာခိုင်နှုန်းထက် ကောင်းစွာ ကျော်လွန်ခဲ့သည်။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စီးပွားရေးနှေးကွေးမှု ကြုံတွေ့ရသော ၂၀၀၁ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၅ ခုနှစ်အထိ တိုးတက်မှုမှာ အတော်လေး နှေးကွေးလာခဲ့ပြီး၂၀၀၇ ခုနှစ်၏ တတိယလေးလပတ်တွင် ၄.၁% ထိ အရှိန်မြင့် တိုးတက်လာခဲ့သည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ် မေလတွင် ငွေကြေးဖောင်းပွမှုနှုန်း(inflation)သည် တစ်နှစ်လျှင် ၂.၈% ထိရှိလာခဲ့သည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဧပြီလတွင် အလုပ်လက်မဲ့ရာခိုင်နှူန်းသည် ၈.၂%(သိုမဟုတ် ILO၏ သတ်မှတ်ချက်အရ ၆.၇%) ရှိလာပြီး ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလသို့ ရောက်ရှိလာသောအခါမှသာ ၃.၄% သို့ ကျဆင်းသွားခဲ့သည်။
နယ်သာလန်နိုင်ငံသည် ဂီနီညွှန်းကိန်း(GINI coefficient)အရကြည့်မည်ဆိုလျှင်လည်း အလွန်နည်းပါးပြီး ၀.၃၂၆ သာ ရှိသည်။ နိုင်ငံသားအလိုက် ဂျီဒီပီမှာ ၇ နိုင်ငံမြောက် အမြင့်ဆုံးတွင်ရှိသော်လည်း ယူနီဆက်(UNICEF) ၏ ချမ်းသာသော နိုင်ငံများတွင် ကလေးများအတွက် သုခပြည့်စုံမှု၌ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်တွင် ထိပ်ဆုံး အဆင့် ၁ နေရာတွင် ရှိနေသည်။ စီးပွားရေးလွတ်လပ်ခွင့် ညွှန်းကိန်း(Index of Economic Freedom)အရ လွတ်လပ်သော ဈေးကွက် အရင်းရှင်စီးပွားရေးတွင် ၁၅၇ နိုင်ငံအား တိုင်းတာခဲ့ရာတွင် အဆင့် ၁၃ ရှိသော နိုင်ငံဖြစ်သည်။
အမ်စတာဒမ်သည် နယ်သာလန်နိုင်ငံ၏ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ မြိုတော်ဖြစ်သည်။ Euronext ၏ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သော အမ်စတာဒမ်စတော့အိတ်ချိန်း(Amsterdam Stock Exchange, AEX)သည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ သက်တမ်းအရင့်ဆုံး စတော့အိတ်ချိန်းဖြစ်ပြီး ဥရောပ၏ အကြီးဆုံးစတော့အိတ်ချိန်းများထဲမှညတစ်ခုဖြစ်သည်။ စတော့အိတ်ချိန်းသည် မြို့တော်၏ အလယ် ဒမ်ရင်ပြင်(Dam Square)အနီးတွင် တည်ရှိသည်။ ယူရိုငွေကြေးကို တည်ထောင်သူ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအနေဖြင့် နယ်သာလန်နိုင်ငံသည် ၎င်း၏ ယခင်ငွေကြေးဖြစ်သော "ဂီဒါ"နှင့် လဲလှယ်ခြင်းကို အခြားသော ထောက်ခံသူ ၁၅ နိုင်ငံနှင့်အတူ လဲလှယ်ခြင်းကို ၁ ဇန်နဝါရီ ၁၉၉၉ တွင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး အမှန်တကယ် အသုံးပြုခြင်းကို ၁ ဇန်နဝါရီ ၂၀၀၂ ခုနှစ်တွင် ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သည်။ ၁ ယူရိုသည် ဒတ်ခ်ျဂီဒါ ၂.၂၀၃၇၁ နှင့် ညီမျှသည်။ ကာရစ်ဘီယံနယ်သာလန်တွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာကို ယူရိုအစား အသုံးပြုကြသည်။
ဥရောပ၏ အကြီးဆုံး ဆိပ်ကမ်းဖြစ်သော ရော်တာဒမ်ဆိပ်ကမ်းတည်ရှိရာ နယ်သာလန်နိုင်ငံ၏ တည်နေရာသည် ဂျာမနီနှင့် ယူနိုက်တက်ကမ်းဒမ်းအကြား ဈေးကွက်ချိတ်ဆက်ပေးရာ နေရာပင်ဖြစ်သည်။ စီးပွား‌ရေး၏ အခြားသော အရေးပါသည့် အစိတ်အပိုင်းမှာ နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်ရေး၊ ဘဏ်လုပ်ငန်းနှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတို့ဖြစ်သည်။ အမ်စတာဒမ်မြို့သည် နိုင်ငံတကာ ခရီးသွားဧည့်သည် ၄.၂ မီလီယံကျော် လာရောက်လည်ပတ်သည့် ဥရောပ၏ ၅ နေရာမြောက် ခရီးသွားထူထပ်ဆုံးသော မြို့ဖြစ်သည်။ ဥရောပသမဂ္ဂ၏ ရွေ့ပြောင်းလုပ်သားများ တိုးပွားလာမှုကြောင့် ဗဟိုနှင့် အရှေ့ဥရောပမှ ရွေ့ပြောင်းလုပ်သားများ နယ်သာလန်နိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိလာခဲ့ကြသည်။
နယ်သာလန်နိုင်ငံသည် နိုင်ငံခြားတိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွင် ထိပ်ဆုံးနိုင်ငံများမှ တစ်နိုင်ငံအဖြစ် ဆက်လက်ဦးဆောင်ခဲ့ပြီး အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် ရင်နှီးမြုပ်နှံမှု အကြီးမားဆုံးသော နိုင်ငံကြီး ၅ နိုင်ငံမှ တစ်နိုင်ငံဖြစ်သည်။ ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် စီးပွားရေးနှေးကွေးလာမှုနှင့် ကြုံတွေ့ခဲ့ရသော်လည်း ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် ပို့ကုန်တိုးမြှင့်မှုနှင့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ခိုင်မာခြင်းတို့ကြောင့် ခြောက်နှစ်အတွင့် အမြင့်ဆုံးနေရာသို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးဖိုရမ်၏ အရ နယ်သာလန်နိုင်ငံသည်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်မှု စီးပွားရေးအရှိဆုံး စတုတ္ထမြောက်နိုင်ငံ ဖြစ်လာခဲ့သည်။
၁၉၅၀ ခုနှစ်များ အစောပိုင်းတွင် နယ်သာလန်နိုင်ငံတွင် ကြီးမားသော သဘာဝဓာတ်ငွေ့သိုက်များကို တွေ့ရှိခဲ့သည်။ သဘာဝဓာတ်ငွေ့များ ရောင်းချခြင်းသည် ဆယ်စုနှစ်များစွာကြာအောင် ယူရိုဘီလီယံများစွာကို ပေါင်းထည့်ခြင်းဖြင့် အစိုးရ၏ဝင်ငွေတိုးလာစေပြီး နယ်သာလန်နိုင်ငံ၏ ဘဏ္ဍာငွေကို များပြားလာစေရန် ပြုလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့သည်။ သို့ပေမယ်လည်း နိုင်ငံ၏ ကြီးမားသော စွမ်းအင်ကြွယ်ဝမှုသည် မမြင်နိုင်သော အကျိုးဆက်များအဖြစ် စီးပွားရေးအခြားသော အစိတ်အပိုင်းတို့၏ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းကို ထိခိုက်ခဲ့ပြီး ထိုအခြေအနေကို ဒတ်ခ်ျရောဂါဟု ခေါ်ဆိုခဲ့ကြသည်။
ကျောက်မီးသွေးနှင့် ဓာတ်ငွေ့မှလွဲ၍ နိုင်ငံ၌ အခြားသော တွင်းထွက်သတ္တုများ မရှိချေ။ နောက်ဆုံးသော ကျောက်မီးသွေးတွင်းကို ၁၉၇၄ ခုနှစ်တွင် ပိတ်သိမ်းခဲ့သည်။ ဂရိုနင်ဂန်ဓာတ်ငွေ့တူးဖော်ရာမြေသည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အကြီးဆုံးသော ဓာတ်ငွေ့တူးဖော်သည့် လုပ်ငန်းမြေထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပြီး စလော့ချ်သာရင်းကျေးရွာအနီးတွင် တည်ရှိသည်။ ၁၉၇၀ ခုနှစ်များ အလယ်ပိုင်းကတည်းကပင် အဆိုပါ ဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်းမှ နိုင်ငံဘဏ္ဍာငွေ ယူရို ၁၅၉ ဘီလီယံခန့် ရရှိ၍နေသည်။ ထိုဓာတ်ငွေ့တူးဖော်ခြင်းကို အစိုးရပိုင် Gasunie ကုမ္ပဏီမှ ဆောင်ရွက်ပြီး ထုတ်လုပ်မှုကို အစိုးရပိုင် Royal Dutch Shell နှင့် Exxon Mobil တို့မှ ပူပေါင်းဆောင်ရွက်သည်။ "ဓာတ်ငွေ့တူးဖော်ခြင်းသည် ကမ္ဘာမြေပြင်းထန်စွာ တုန်ခါမှုကို တိုးလာစေပြီး အချို့သော တိုင်းတာချက်များတွင် ၃.၆ ရစ်ချက်တာစကေးလောက်အထိ ပြင်းအားရှိသည်။ ပျက်စီးမှုများအား ပြင်ဆင်စရိတ်၊ အဆောက်အဦတို့၏ ဖွဲ့စည်းပုံအဆင့်မြှင့်ခြင်းနှင့် တန်ဖိုးနိမ့်ကျသွားသော အိမ်ရာများအတွက်လျော်ကြေးသည် ယူရို ၆.၅ ဘီလီလံ နီးပါးရှိ၍‌နေပြီဖြစ်သည်။ အိမ်ခြေ ၃၅,၀၀၀ နီးပါးသည် ဤအကျိုးသက်ရောက်မှုကို ခံစားရသည်ဟု ဆိုသည်။" နယ်သာလန်နိုင်ငံတွင် ဥရောပသမ္မဂ္ဂ၏ ၂၅ % ခန့်သော သိုလှောင်ထားသော သဘာဝဓာတ်ငွေ့ရှိသည်။ စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုသည် ၂၀၁၄ ခုနှစ်၌ နိုင်ငံဂျီဒီပီ၏ ၁၁% နီးပါးရှိ၍နေသည်။ နယ်သာလန်နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးသည် သဘာဝဓာတ်ငွေ့သိုလှောင်မှုမှ အဓိကမျှဝေမှု ရရှိ၍နေသောကြောင့် စွမ်းအင်သတ်မှတ်ချက်တွင် အလွန်မြင့်သည့်အခြေအနေသို့ ရောက်ရှိနေသည်။
နယ်သာလန်နိုင်ငံသည် စွမ်းအင်ထောက်ပံ့မှုတွင် အနာဂတ်စိန်ခေါ်မှုအဖြစ် ကြုံတွေ့နိုင်ပြီး ၂၀၂၅၌ ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးမှုတွင် လိုအပ်မှုများနှင့် ကြုံတွေ့နိုင်သည်ဟု ခန့်မှန်းကြသည်။ အထူးသဖြင့် နယ်သာလန်နိုင်ငံ၏ အဓိက ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်ရာ‌နေရာဖြစ်သော ဂရိုနင်ဂန် ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်ရေးနေရာတွင် ပြတ်တောက်မှုများနှင့် ကြုံတွေ့နိုင်ပြီး မြေငလျင်များသည် ဂရိုနင်ဂန်ဒေသကို လှုပ်ခတ်နိုင်သည်။ နယ်သာလန်နိုင်ငံ၏ စွမ်းအင်ထောက်ပံ့မှုသည် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ပေါ်တွင် ကြီးမားစွာ မူတည်နေသည်။ ဓာတ်ငွေ့သည် နယ်သာလန်နိုင်ငံ၏ အိမ်များအား ပူနွေးမှုပေးနိုင်သည့် အဓိကရင်းမြစ်ဖြစ်ပြီး ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် စွမ်းအင်ပေါင်းစပ်မှု၏ ၃၅ ရာခိုင်နှုန်းအား ကိုယ်စားပြုသည်။ ထို့အပြင် European Union 2020 package (GHG ထုတ်လွှတ်မှုအား ၂၀% လျော့ချရေး၊ စွမ်း‌အင်‌အစု၏ ၂၀% မှာ ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ဖြစ်ရေး၊ စွမ်းအင် ထိရောက်စွာ အသုံးချနိုင်မှု ၂၀ % တိုးမြှင့်နိုင်ရေး) အား ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ရာ နယ်သာလန်နိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်းစွမ်းအင်မူဝါဒနှင့် ပတ်သက်၍ များစွာ လွှမ်းမိုးမှုရှိခဲ့ပြီး အစိုးရမဟုတ်သော လုပ်ဆောင်နေသူများအား စီးပွားရေး၏ ဝင်ငွေအရင်းအမြစ်အဖြစ် သဘာဝရင်းမြစ်များ အပေါ်တွင် မှီခိုအားထားမှုကို လျော့ချစေပြီး စွမ်းအင်ဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွင် သဘောတူညီစေရန် ဖိအားပေးခဲ့သည်။  ထို့ကြောင့် သဘာဝရင်းမြစ်များ ပြတ်တောက်သွားလျှင် အထူးသဖြင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့များ ပြတ်တောက်သွားခဲ့လျှင် နိုင်ငံ၏ စွမ်းအင်ဆိုင်ရာ လုံခြုံရေး လုံခြုံစိတ်ချမှု ရှိစေရန် ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်သို့ ကူးပြောင်းရေးမှာ နယ်သာလန်နိုင်ငံ၏ အဓိကမူဝါဒ ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံစွမ်းအင်စုစုပေါင်း၏ ၁၄% သည် ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ဖြစ်လာရေး မူဝါဒချမှတ်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် အစိုးရ၏ စုစုပေါင်း စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုအား ထောက်ပံ့ပေးမှု၌ ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုတွင် ၃၁%(EUR 743MM) ရှိနေချိန်၌ သမာရိုးကျ စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုအပိုင်းတွင် ၆၉% (EUR 1.6B) ရှိသည်။ ထို့အပြင် နယ်သာလန်နိုင်ငံ၏ စွမ်းအင်ဈေးကွက်၌ Nuon၊ RWE၊ E.ON၊ Eneco နှင့် Delta စသော အဓိက ကော်ပိုရေးရှင်းများက ဆက်လက်လွှမ်းမိုးထားပြီး ထိုကုပ္ပဏီများသည် စွမ်းအင်ဆိုင်ရာမူဝါဒကိုပင် သိသိသာသာ လွှမ်းမိုးမှု ရှိနေသည်။ ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်သည် နိုင်ငံစွမ်းအင်ပေါင်းစပ်မှု၏ ၁၂.၄% သို့ ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး မူလရည်မှန်းချက်ဖြစ်သော ၁၄% ထက် ၁.၆% လျော့ကျ၍နေသည်။
ဒတ်ချ်စိုက်ပျိုး​ရေးကဏ္ဍသည် စက်မှုလယ်ယာသို့ ကြီးမားစွာ ပြောင်းလဲခဲ့ပြီးဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတကာသို့ တင်ပို့မှုကို များစွာအဓိကထားခဲ့သည်။ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးတွင် ဒတ်ခ်ျလုပ်သားစွမ်းအား၏ ၄ ရာခိုင်နှုန်းလောက်သာ အသုံးပြုသော်လည်း အစားအစာထုတ်လုပ်မှုတွင် များစွာပိုလျှံခဲ့ပြီး ဒတ်ချ်ပြည်ပပို့ကုန်တန်ဖိုးစုစု‌ပေါင်း၏ ၂၁ ရာနှုန်းရှိခဲ့သည်။ စိုက်ပျိုးရေးပို့ကုန်တန်ဖိုးတွင် ဒတ်ချ်တို့သည် ဥရောပသမဂ္ဂတွင် ပထမနေရာ၊ ကမ္ဘာတဝှမ်းတွင် ဒုတိယနေရာတွင်ရှိပြီး ၎င်း၏ရှေ့တွင် အမေရိကန်နိုင်ငံသာ ရှိသည်။ ထို့ပြင် စိုက်ပျိုးရေးပို့ကုန်များမှ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် ယူရိုငွေ ၇၅.၄ ဘီလီယံရရှိခဲ့ပြီး ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် ယူရို ၈၀.၇ ဘီလီယံထိမြင့်တက်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၉ တွင် ယူရို ၉၄.၅ ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိသော စိုက်ပျိုးရေးပို့ကုန်များ တင့်ပို့နိုင်ခဲ့သည်။
နိုင်ငံတဝှမ်းမှ ငရုတ်ပွသီး၊ ခရမ်းချဉ်သီး၊ သခွားသီးတင်ပို့မှုသည် ကမ္ဘာတဝှမ်းတင်ပို့မှု၏ သုံးပုံပုံတစ်ပုံရှိသည်။ နယ်သာလန်နိုင်ငံ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ပန်းသီးတင်ပို့မှု၏ ၁၅ ပုံတစ်ပုံကိုလည်း တင်ပို့သော နိုင်ငံဖြစ်သည်။
ထို့အပြင် ဒတ်ခ်ျစိုက်ပျိုး‌ရေးပို့ကုန်များ၏ ထင်ရှားသော အစိတ်အပိုင်းတွင် အပင်များ၊ ပန်းများနှင့် ပန်းဥများပါဝင်ပြီး နယ်သာလန်နိုင်ငံ၏ တင်ပို့မှုသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတင်ပို့မှု၏ သုံးပုံနှစ်ပုံရှိသည်။
၁၉၅၀ ခုနှစ်များကတည်းကစ၍ ဒတ်ချ်လမ်းမများ​ပေါ်တွင် သွားလာလှုပ်ရှားမှု မြင့်တက်များပြားလာခဲ့ကာ ယခုအချိန်တွင် တစ်နှစ်တွင် ကီလိုမီတာ ၂၀၀ ဘီလီယံ​ကျော်မျှ သွားလာကြပြီး ​လေးပုံသုံးပုံမှာ ကားဖြင့်သွားလာကြသည်ကို ​တွေ့ရသည်။နယ်သာလန်နိုင်ငံတွင်းရှိ ခရီးအားလုံး၏ ထက်ဝက်ခန့်မှာ ကားဖြင့်သွားကြခြင်းဖြစ်ပြီး ၂၅%မှာ စက်ဘီးဖြင့်၊ ၂၀%မှာ လမ်း​လျှောက်၍ သွားကြပြီး ၅% နှုန်းမှာ အများပြည်သူ သယ်ယူပို့​ဆောင်​ရေးကို အသုံးပြုကြသည်။
၂,၇၅၈ ကီလိုမီတာရှိ​သော အ​ဝေး​ပြေးလမ်းမကြီး အပါအဝင် စုစု​ပေါင်း လမ်းကွန်ယက်သည် ၁၃၉,၂၉၅ ကီလိုမီတာရှိ​သော နယ်သာလန်နိုင်ငံသည် ကမ္ဘာ​ပေါ်ရှိ လမ်းကွန်ယက် အထူထပ်ဆုံး​သော နိုင်ငံများမှတစ်ခုဖြစ်ပြီး ဂျာမနီနှင့် ပြင်သစ်နိုင်ငံတို့ထက် ပို၍ထူထပ်​သော လမ်းကွန်ယက်ရှိ၍ ဘယ်လ်ဂျီယမ်နိုင်ငံ​လောက်​တော့ ထူထပ်မှု မရှိ​သေး​ချေ။
ပြန်လည်ပြည့်စွမ်းနိုင်​သော ဝန်းကျင်ဖြစ်လာ​စေ​ရေး ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှု၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ် နယ်သာလန် အစိုးရသည် လျှပ်စစ်ကားများအတွက် နိုင်ငံတစ်ဝန်းတွင် ပြန်လည်အားသွင်းနိုင်​သော ​နေရာ ၂၀၀ ​ကျော်အား တည်​ဆောက်မည့် စီမံကိန်းကို စတင်ခဲ့သည်။ ဤဝန်​ဆောင်မှုကို ဆွစ်ဇာလန်ကုမ္ပဏီ ABB နှင့် ဒတ်ချ်ကုမ္ပဏီ Fastned တို့မှ တာဝန်ယူ ​ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပြီး အချင်းဝက် ၅၀ ကီလိုမီတာတွင် အနည်းဆုံး အားသွင်းနိုင်​သော ​နေရာဌာန ၁ ခု အနည်ဆုံး ထားရှိပြီး နယ်သာလန်နိုင်ငံရှိ အိမ်တိုင်းအတွက် ရည်ရွယ်ပါသည်။
သွားခဲ့သော ခရီးမိုင်အရှည်၏ ၁၃ ရာခိုင်နှုန်းမှာ အများပြည်သူ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်ကို အသုံးပြု၍ သွားလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး အများစုမှာ ရထားကို အသုံးပြု၍ သွားလာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အခြားသော ဥရောပနိုင်ငံများကဲ့သို့ပင် ဒတ်ချ်မီးရထားကွန်ယက်သည် ၃,၀၁၃ ကီလိုမီတာရှိပြီး အ​တော်ကို ထူထပ်ပါသည်။ မီးရထားကွန်ယက်ကို ခရီးသည်သယ်ယူပို့​ဆောင်​ရေးအတွက် အဓိကထား အသုံးပြုပြီး အဓိက မြို့ကြီးနှင့် တခြား​သော မြို့များကို ဆက်သွယ်ပေးထားသော မီးရထားဘူတာရုံ ၄၀၀ ​ကျော်ရှိသည်။ မီးရထားသွားလာမှုနှုန်းမှာသွားလာမှုနည်း​သော မီးရထားလိုင်း[မှတ်စု ၉]တွင် တနာရီတွင် ရထား ၂ စီးခန့်ရှိပြီး ပုံမှန်သွားလာမှုရှိ​သော မီးရထားလိုင်းတွင် တနာရီ မီးရထား ၄ စင်းခန်ရှိကာ သွားလာမှုထူထပ်​သော လိုင်းတွင် တနာရီ ၈ စင်းမျှရှိသည်။ ဒတ်ချ် နိုင်ငံ​တော် မီးရထားကွန်ယက်တွင် ​ကျောင်းသားများအတွက် အခမဲ့ဖြစ်ပြီး ထိုအခမဲ့စနစ်တွင် အမ်စတာဒမ်မီသရိုပိုလစ်တန်ဧရိယာမှ ဘယ်လ်ဂျီယမ်နယ်စပ်ကို ဖြတ်သန်း​၍ လန်ဒန်နှင့် ပဲရစ်ကို ​ပြေးဆွဲ​သော HSL-Zuid အမြန်မီးရထားလိုင်းပါ ပါဝင်သည်။
စက်ဘီးဖြင့် ခရီးသွားခြင်းသည် နယ်သာလန်နိုင်ငံတွင် ကျယ်ပြန့်စွာ အသုံးပြုသည် အပြုအမူဖြစ်ပြီး သွားလာမှုခရီးမိုင်အရှည်မှာ ရထားဖြင့်သွား​သော ခရီးမိုင်အရှည် နီးပါးဖြစ်သည်။ ဒတ်ချ်တို့တွင် စက်ဘီးအ​ရေအတွက် ၁၈ မီလီယံမျှ ပိုင်ဆိုင်ကြပြီး နိုင်ငံသားဦး​ရေအရ တစ်ဦးလျှင် စက်ဘီးတစ်စီးထက်မက ပို၍ပိုင်ဆိုင်ကြသည်ဖြစ်ရာ လမ်းမ​ပေါ်တွင် သွားလာကြ​သော ကားအ​ရေအတွက် ၉ မီလီယံခန့်ထက် နှစ်ဆ ပို၍များပြားသည်။  ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် ဥ​ရောပစက်ဘီးစီးဖက်ဒ​ရေးရှင်း၏အဆိုအရ နယ်သာလန်နှင့် ဒိန်းမတ်နိုင်ငံတို့ကို ဥ​ရောပတွင် စက်ဘီးစီးခြင်းကို နှစ်သက်ဆုံးသော နိုင်ငံများအဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့​သော်လည်း ဒတ်ချ်(၃၆%)သည် ဒိန်းမတ်(၂၃%)ထက် သမာရိုးကျ​နေ့ရက်များတွင် စက်ဘီးဖြင့် ခရီးသွားလာခြင်းကို ပြုမှုကြသည်။[မှတ်စု ၁၀] စက်ဘီးစီးခြင်းအတွက် လိုအပ်​သော အ​ခြေခံ အ​ဆောက်အဦများ ပြည့်စုံပြီး သွားလာမှုများပြား​သော လမ်းများ၌တွင်ပင် စက်ဘီးစီးလမ်းများအတွက် ၃၅,၀၀၀ ကီလိုမီတာ ခန့်အရှည်ရှိသော သီးခြားခွဲထားသော လမ်းများကို ပြုလုပ်ထားသည်။ သွားလာမှုရှုပ်​ထွေး​သော လမ်းဆုံများတွင် စက်ဘီးစီးသူများအတွက် သီးခြားမီးပွိုင့်များကို တပ်ဆင်ထားသည်။ မြို့​တော်ရှိ စင်တာများ၊ မီးရထား ဘူတာရုံများတွင် စက်ဘီးများ ထားရှိရန် ရပ်နား​နေရာများကို ပြုလုပ်၍ထားသည်။
​​ရော်တာဒမ် ဆိပ်ကမ်းသည် ဥ​ရောပတွင် အကြီးဆုံးဆိပ်ကမ်းဖြစ်ပြီး မျူစ်မြစ်နှင့် ရိုင်းမြစ်တို့၏ ​​ကောင်း​မွန်​သော ​ရေ​ကြောင်းလမ်းများမှ တဆင့် ကုန်းတွင်းပိုင်း မြစ်ညာရှိ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၊ ဘာဆဲမြို့နှင့် ဂျာမနီနိုင်ငံ အတွင်းပိုင်း၊ ပြင်သစ်တို့ကို ​ရောက်ရှိနိုင်သည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အရ ​ရော်တာဒမ်ဆိပ်ကမ်းသည် ကမ္ဘာ​ပေါ်ရှိ ရှစ်ခု​မြောက် အကြီးဆုံး ကွန်တိန်နာဆိပ်ကမ်းဖြစ်ပြီး ၄၄၀.၅ မက်ထရစ်တန်ရှိသည့် ကုန်ပစ္စည်းကို နှစ်စဉ် သယ်ယူပို့​ဆောင်မှု ပြု​နေရသည်။ ဆိပ်ကမ်း၏ အဓိက လုပ်ငန်း​ဆောင်တာတို့တွင် ​ရေနံဓာတုပစ္စည်းများ သယ်ယူပို့​ဆောင်​ရေးနှင့် သင်္ဘောတစင်းမှ တစင်းသို့ ကုန်စည် ​ပြောင်း​ရွေ့​ပေးခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။ ဆိပ်ကမ်း၏ လုပ်ငန်း​ဆောင်တာများတွင် ဥ​ရောပပင်မကုန်​မြေမှ နိုင်ငံရပ်ခြားသို့ ကုန်စည်ပို့​ဆောင်မှုများအကြား အ​ရေကြီး​သော ကုန်စည်ချိန်း​ပြောင်းရာ​နေရာအဖြစ်လည်း လုပ်​ဆောင်သည်။ ​ရော်တာဒမ်မှ ကုန်စည်များကို သင်္ဘော၊ မြစ်ကူးရေယာဉ်၊ ရထား သို့မဟုတ် ကားလမ်းများဖြင့် ပို့​ဆောင်သည်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် ​ရော်တာဒမ်မှ ဂျာမနီသို့ အမြန်ကုန်တင်ရထားလမ်း​ကြောင်းသစ်ဖြစ်​သော Betuweroute ကို တည်​ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။
အမ်စတာဒမ်မြို့ အ​နောက်​တောင်ဘက်ရှိ ရှီပိုးလ်​လေဆိပ်(Schiphol airport) နယ်သာလန်နိုင်ငံ၏ အဓိက အပြည်ပြည်ဆိုင်​လေဆိပ်ဖြစ်ပြီး ခရီးသည် အဝင်အထွက်အရဥ​ရောပတွင် တတိယ​မြောက် အလုပ်အများဆုံးသော ​လေဆိပ်ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် ​တော်ဝင် ရှီပိုးအုပ်စု ​လေဆိပ်မှ ခရီးသည် ၇၀ မီလီယံ ခရီးသွားလာ​ရေးကိူ ​ဆောင်ရွက်​ပေးနိုင်ခဲ့သည်။
ဖိုင်:Population of the Netherlands 1900-2000.png
၁၉၀၀ မှ ၂၀၀၀ ခုနှစ်ထိ နယ်သာလန်နိုင်ငံ၏ လူဦးရေ
၂၀၁၉ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့စာရင်းအရ နယ်သာလန်နိုင်ငံတွင် ခန့်မှန်းလူဦး​ရေ ၁၇,၄၂၄,၉၇၈ ရှိပြီး မြို့ပြနိုင်ငံ အဆင့်သာရှိသော နိုင်ငံငယ်များဖြစ်သည့် မိုနာကိုနိုင်ငံ၊ ဆန်မာရီနိုနိုင်ငံနှင့် ဗာတီကန်စီးတီးတို့အား ထည့်သွင်းတွက်ချက်ခြင်းမပြုပါက ဥရောပတွင် ပဉ္စမမြောက်လူဦးရေ သိပ်သည်းမှု အများဆုံးနိုင်ငံ ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာပေါ်တွင် ၁၂ နိုင်ငံမြောက် လူဦးရေ သိပ်သည်းမှုအများဆုံးသော နိုင်ငံဖြစ်ပြီး သိပ်သည်းမှုမှာ ၅၂၁ per square kilometre (၁,၃၅၀ per square mile) ရှိသည်။ ထို့ပြင် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ၆၄ နိုင်ငံမြောက် လူဦးရေ အများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်သည်။ ၁၉၀၀ မှ ၁၉၅၀ ခုနှစ်အတွင်း နိုင်ငံ့လူဦးရေသည် နှစ်ဆနီးပါး မြင့်တက်သွားကာ ၅.၁ မှ ၁၀ မီလီယံအထိ မြှင့်တက်ခဲ့သည်။ ၁၉၅၀ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၀ ခုနှစ်အတွင်း လူဦးရေသည် ဆက်လက်မြှင့်တက်လာခဲ့ရာ ၁၅.၉ မီလီယံထိ ရောက်ရှိလာခဲ့ပေမယ့် တိုးတက်နှုန်းမှာ နှေးကွေး‌သွားခဲ့သည်။ ခန့်မှန်းလူဦးရေ တိုးတက်မှုနှုန်းမှာ ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် ၀.၄၄% ရှိသည်။
အမျိုးသမီးများ၏ တစ်နှစ်အတွင်း ကလေးအရှင်မွေးဖွားနှုန်း(fertility rate)သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ် ခန့်မှန်းနှုန်းအရ အမျိုးသမီးတစ်ဦးလျှင် ကလေး ၁.၇၈ နှုန်းရှိပြီး အခြား ဥရောပနိုင်ငံများစွာနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် မြင့်မားနေသောလည်း သက်ကြီးရွယ်အိုနိုင်ငံသားများအတွက် အစားထိုးလိုလားချက်(sub-replacement fertility)ဖြစ်သော အမျိုးသမီးတစ်ဦးလျှင် ကလေး ၂.၁ နှုန်းနှင့်ယှဉ်လျှင် နိမ့်၍နေပြီး ၁၈၇၉ ခုနှစ်မှ နှုန်းဖြစ်သည့် အမျိုးသမီးတစ်ဦးလျှင် ကလေး ၅.၃၉ နှုန်းနှင့်စာလျှင်လည်း နိမ့်ကျ၍နေသေးသည်။. ထို့ပြင် နယ်သာလန်နိုင်ငံသည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ သက်ကြီးရွယ်အို လူဦးရေများစွာရှိသော နိုင်ငံများထဲမှ တစ်နိုင်ငံဖြစ်ပြီး နိုင်ငံသားအားလုံး၏ ပျမ်းမျှအသက်သည် ၄၂.၇ နှစ် ဖြစ်သည်။ မျှော်မှန်းသော သက်တမ်းမှာ နယ်သာလန်နိုင်ငံ၌ မြင့်မားလျက်ရှိပြီး အမျိုးသမီးများအတွက် ၈၃.၂ နှစ်ဖြစ်ပြီး အမျိုးသားများအတွက် ၇၈.၉ နှစ် (၂၀၁၃ ခုနှစ် ခန့်မှန်းအရ) ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတွင် ရွေ့ပြောင်းနေထိုင်သူနှုန်းမှာ တစ်နှစ်တွင် အခြေချနေထိုင်သူ ၁၀၀၀ တွင် ရွေ့ပြောင်းနေထိုင်သူ ၂.၀ နှုန်းရှိသည်။ နယ်သာလန်နိုင်ငံ၏ လူဦးရေတွင် အဓိကမှာ ဒတ်ချ်လူမျိုးများဖြစ်ပြီး ၂၀၀၅ ခုနှစ် ခန့်မှန်းအရ လူဦး​ရေ၏ ၈၀.၉% မှာ ဒတ်ချ်လူမျိုးများဖြစ်ပြီး အင်ဒိုနီးရှား ၂.၄%၊ ဂျာမန် ၂.၄%၊ တူရကီ ၂.၂%၊ ဆူရာနမ် ၂.၀%၊ ​မော်ရိုကို ၀.၈%၊ နယ်သာလတ် ကာရစ်ဘီယံ​ဒေသနှင့် အာရူးဘားမှ ၀.၈%နှင့် အခြားလူမျိုး ၇.၄%ရှိသည်။ နယ်သာလန်နိုင်ငံ၌ ​နေထိုင်ကြ​သော ၁၅၀,၀၀၀ မှ ၂၀၀,၀၀၀ ထိ​သော လူများမှာ အခြား​သော နိုင်ငံများမှ အလုပ်နှင့် အခြား​သော အ​ကြောင်းအရာများဖြင့် ​​ရောက်ရှိလာကြသူများဖြစ်ပြီး အမ်စတာဒမ်မြို့နှင့် ဟိတ်မြို့တို့တွင် အဓိက​နေထိုင်ကြပြီး ယခုအခါတွင် ထိုမြို့များ၏ လူဦး​ရေ၏ ၁၀% ခန့်ရှိ၍ ​နေပြီဖြစ်သည်။
ဒတ်ချ်လူမျိုးများသည် နိုင်ငံသားအလိုက်ဆိုရင် ကမ္ဘာ​ပေါ်တွင် အရပ်အရှည်ဆုံး​သော သူများဖြစ်ပြီး ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် ပျမ်းမျှအရပ်မှာ အရွယ်​ရောက်ပြီးသား ​ယောက်ျား​လေးတစ်​ယောက်၏ အရပ်မှာ ၁.၈၁ မီတာ (၅ ft ၁၁.၃ in) ရှိပြီး အရွယ်​ရောက်ပြီး အမျိုးသမီးမှာ ၁.၆၇ မီတာ (၅ ft ၅.၇ in) ရှိသည်။  ​တောင်ပိုင်းတွင်ရှိ​သော နိုင်ငံသားများမှာ ပျမ်းမျှအားဖြင့် ​မြောက်ပိုင်းတွင်​နေထိုင်သူများထက် အရပ် ၂ cm (၀.၈ လက်မ) ခန့် ပို၍ ပုသည်။
Eurostat ၏ အဆိုအရ ၂၀၁၀ ခုနှစ်၌ နယ်သာလန်နိုင်ငံတွင် နိုင်ငံခြားဖွား နေထိုင်သူ(foreign-born residents)ဦးရေသည် ၁.၈ မီလီယံရှိပြီး စုစုပေါင်း လူဦးရေ၏ ၁၁.၁% ရှိရာ ထိုအထဲတွင် ၁.၄ မီလီယံ(၈.၅%) သည် ဥရောပသမဂ္ဂပြင်ပတွင် မွေးဖွားခဲ့သူများဖြစ်ပြီး ၀.၄၃ မီလီယံ(၂.၆%)မီလီယံသည် အခြားသော ဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများတွင် မွေးဖွားခဲ့သူများ ဖြစ်ကြသည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၂၁ တွင် နယ်သာလန်နိုင်ငံ၌ နေထိုင်သူ ၃.၈ မီလီယံတွင် နိုင်ငံခြားဖွား မိဘတစ်ဦး(ရွေ့ပြောင်းနေထိုင်မှု ရာဇဝင်ရှိသူ) ပါဝင်ပြီး အမ်စတာဒမ်နှင့် ရော်တာဒမ်တွင် လူငယ် ထက်ဝက်ကျော်သည်အနောက်တိုင်းနိုင်ငံ မဟုတ်သော နောက်ခံရှိကြသည်။ ဒတ်ချ်လူမျိုး သို့မဟုတ် ဒတ်ချ် အဆက်အနွယ်များမှ ဆင်းသက်လာသူများကို ကမ္ဘာအနှံတွင် ​ရွေ့​ပြောင်း​နေထိုင်သူ အသိုင်းအဝန်းတွင် ​တွေ့မြင်နိုင်ပြီး အထူးသဖြင့် က​နေဒါ၊ ဩစ​တေးလျ၊ ​တောင်အာဖရိကနှင့် အ​မေရိကန်ပြည်​ထောင်စု​တွင် ​တွေ့ရသည်။ United States Census Bureau (၂၀၀၆ခုနှစ်)၏ အဆိုအရ အ​မေရိကန် ၅ မီလီယံ​ကျော်သည် ဒတ်ချ်လူမျိုးမှ တစိတ်တပိုင်း သို့ အပြည့်အဝ ဆင်းသက်လာခဲ့သူများအဖြစ် အခိုင်အမာ ဆိုကြသည်။ ဤအ​ရေအတွက်မှာ ​တောင်အာဖရိကမှ ဒတ်ချ်လူမျိုးမှ ဆင်းသက်လာသူ အာဖရိကလူမျိုးများအဖြစ် ဆိုကြသူ ၃ မီလီယံခန့်နှင့် အ​ရေအတွက် နီးစပ်တူညီကြသည်။ ၁၉၄၀ ခုနှစ်တွင် အင်ဒိုနီးရှား၌ ဥ​ရောပနှင့် ယူ​ရေးရှန်းနွယ် ၂၉၀,၀၀၀ ရှိပြီး အများစုမှာ ယခုအခါ နိုင်ငံမှ ထွက်ခွာသွားပြီဖြစ်သည်။
နယ်သာလန်နိုင်ငံသည် ကမ္ဘာ​ပေါ်တွင် ၁၂ နိုင်ငံ​​မြောက် လူဦး​ရေ အထူထပ်ဆုံး​သော နိုင်ငံဖြစ်ပြီး သိပ်သည်းမှု ၅၂၁ per square kilometre (၁,၃၅၀ per square mile) ရှိသည်  နိုင်ငံ၏ အ​နောက်ပိုင်းရှိ အကြီးဆုံး​သော Randstad မြို့ပြဧရိယာတွင် အကြီးဆုံးမြို့ကြီးများဖြစ်သည့် ​မြောက်​ဟော်လန်ပြည်နယ်မှ အမ်စတာဒမ်မြို့၊ ​တောင်​ဟော်လန်ပြည်နယ်မှ ရော်တာဒမ်မြို့နှင့် ဟိတ်မြို့တော်၊ ယူးထရက်ပြည်နယ်မှ ယူးထရက်မြို့စ​သော မြို့ကြီး ​လေးမြို့ ပါဝင်သည်။ Randstad မြို့ပြဧရိယာတွင် ​နေထိုင်သူ ၈.၂ မီလီယံရှိပြီး ဥ​ရောပတွင် ပဉ္စမမြောက် အကြီးဆုံး မက်ထရိုပိုလစ်တန်ဧရိယာ ဖြစ်သည်။ Dutch Central Statistics Bureau အရ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ဒတ်ချ်လူဦးရေ၏ ၂၈ ရာခိုင်နှုန်းတွင် သုံးစွဲနိုင်သော ဝင်ငွေ(spendable income) ၄၅,၀၀၀ ယူရို ရှိကြသည်။(ထိုအထဲတွင် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့် ပညာရေးအတွက် မပါဝင်ပါ။)
နယ်သာလန် ပရိုတက်စတင့် ဘုရားကျောင်း[မှတ်စု ၁၁] (15.5%)
အခြားသော ခရစ်ယာန်ဘာသာများ[မှတ်စု ၁၂] (4.6%)
ဒတ်ချ်သည် ကမ္ဘာ​ပေါ်ရှိ ဘာသာရေးကိုးကွယ်မှုအနည်းဆုံးသော လူမျိုးများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၂၀ ရာစု​နှောင်းပိုင်းကာလမတိုင်မီအထိ နယ်သာလန်နိုင်ငံသည် ခရစ်ယာန်ဘာသာကို အဓိကကိုးကွယ်​သော နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကွဲပြား​သော ဘာ​သာ​ရေးကိုးကွယ်မှုများ ရှိ​နေ​​သော်လည်း ဘာသာ​ရေးအ​ပေါ် စွဲမြဲလိုက်နာမှုသည် ယုတ်​လျော့၍လာခဲ့သည်။
၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် နယ်သာလန်နိုင်ငံ၏ စာရင်းအင်းနှင့်ဆိုင်​သော သတင်းအချက်အလက်များကို စု​ဆောင်း​သော ဒတ်ချ်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည့် နယ်သာလန် စာရင်းအင်းဌာန(Statistics Netherlands)သည် စုစုပေါင်း လူဦးရေ၏ ၅၀.၁%သည် မည်သည့်ဘာသာ ကိုးကွယ်ခြင်းမရှိကြောင်း ပြောဆိုထားသည်ကို တွေ့ရှိခဲ့ရသည်။ နယ်သာလန်နိုင်ငံ၏ ဘာသာမဲ့များတွင် Humanistisch Verbond အဖွဲ့အစည်းအား ဝင်ထားသူများလည်း ပါဝင်သည်။ ခရစ်ယာန်ဘာသာကိုးကွယ်သူမှာ ၄၃.၈% ရှိပြီး ထိုအထဲမှ ကက်သလစ်ဘာသာကို ကိုးကွယ်သူ ၂၃.၇%၊ နယ်သာလန် ပရိုတက်စတင့် ဘုရားကျောင်းတော်ကို ကိုးကွယ်သူ ၁၅.၅%နှင့် အခြားသော ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်(နယ်သာလန် ပရိုတက်စတင့်ကျောင်းတော်တွင် ပါဝင်မှုမရှိသော အခြားသော ပရိုတက်စတင့်ဂိုဏ်းများ အပါအဝင်) ၄.၆% ပါဝင်သည်။ အစ္စလာမ်ဘာသာကိုးကွယ်သူမှာ စုစုပေါင်း လူဦးရေ၏ ၄.၉% ရှိပြီး အခြားသော ဘာသာတရားများ(ဂျူးဘာသာ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် ဟိန္ဒူဘာသာ) ကိုးကွယ်သူစုစုပေါင်းမှာ ၁.၁% ရှိသည်။
၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် ရက်ဘောင်းဒ်တက္ကသိုလ်(Redboud University) နှင့် လွတ်လပ်သော အမ်စတာဒမ်တက္ကသိုလ်(Vrije Universiteit Amsterdam)တို့၏ အသေးစိတ် လေ့လာမေးမြန်းမှုများအရ ဒတ်ချ်လူဦးရေ၏ ၃၄%သည် ခရစ်ယာန်ဘာသာ ကိုးကွယ်ကြသည်ဟု ပြောဆိုခဲ့ပြီး ၂၀၁၅ ခုနှစ်ထိ လျော့ကျသွားခဲ့မှုမှာ လူဦးရေ၏ ၂၅% သည် ခရစ်ယာအယူဝါဒများမှ တစ်ခုခု(၁၁.၇% ရိုမန်ကက်သလစ်၊ ၈.၆% PKN၊ ၄.၂% မှာ အခြားခရစ်ယာန်ဂိုဏ်းခွဲများ)ကိုသာ ကိုးကွယ်ကြပြီး မွတ်စလင်မှာ ၅%၊ ဟိန္ဒူ သို့မဟုတ် ဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုးကွယ်သူ ၂ %နှင့် ဘာသာမဲ့မှာ လူဦးရေ၏ ၆၇.၈% ရှိခဲ့ရာ ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် ၆၁%၊ ၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင် ၅၃%၊ ၁၉၇၉ ခုနှစ်တွင် ၄၃%နှင့် ၁၉၆၆ ခုနှစ်တွင် ၃၃%မှမြင့်တက်လာခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ Sociaal en Cultureel Planbureau(လူမှုနှင့် ယဉ်ကျေးမှု အေဂျင်စီ၊ SCP) သည် ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် ဘာသာမဲ့အရေအတွက်သည် ၇၂% ခန့် ဖြစ်လာမည်ဟု ခန့်မှန်းကြသည်။
နယ်သာလန်နိုင်ငံ၏ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ ပညာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ကို အာမခံပေးထားရာ ဆိုလိုသည်မှာ ယေဘုယျ စံအရည်အသွေးကို လိုက်နာသော ကျောင်းအားလုံးသည် အစိုးရဘဏ္ဍာငွေ တူညီစွာ ရရှိသည်။ ထိုအထဲတွင် ဘာသာရေးအုပ်စုများ(အထူးသဖြင့် ရိုမန်ကက်သလစ်နှင့် ပရိုတက်စတင့်ဂိုဏ်းခွဲများ)မှ ဘာသာရေးစည်းမျဉ်းအရ အခြေတည်ထားသော ကျောင်းများလည်း ပါဝင်သည်။ ဒတ်ချ်ပါလီမန်ရှိ နိုင်ငံရေးပါတီ ၃ ခု(Christen-Democratisch Appèl၊ Christian Union၊ Staatkundig Gereformeerde Partij Dutch)သည် ခရစ်ယာန် ယုံကြည်မှုတွင် အခြေတည်ထားသည်။ မားစွာသော ခရစ်ယာန် ဘာသာရေး အားလပ်ရက်များသည်လည်း နိုင်ငံတော် အားလပ်ရက်များ(ခရစ္စမတ်၊ အီစတာပွဲတော်နေ့၊ Pentecost၊‌ ယေရှုသခင် ကောင်းကင်ဘုံသို ကြွမြန်းသည့်နေ့)ဖြစ်သည်။ ၁၉ ရာစုနှောင်းပိုင်းတွင် ထာဝရဘုရားသခင်မဲ့ဝါဒသည် လောကီသီးသန့်ဝါဒ၊ လစ်ဘရယ်ဝါဒနှင့် ဆိုရှယ်လစ်ဝါဒများအဖြစ် ကြီးထွားလာခဲ့သည်။ ၁၉၆၀ ခုနှစ်လောက်တွင် ပရိုတက်စတင့်သည် လူမှုအခြေပြများအရ နည်းပါးလာခဲ့ပြီး ကက်သလစ်ဝါဒနှင့် တူညီလာခဲ့ပြီး နောင်တွင် ခရစ်ယာန် ဂိုဏ်းခွဲနှစ်ခုလုံး ကိုးကွယ်မှု စ၍လျော့နည်းလာခဲ့သည်။ အဓိကချွင်းချက်တခုအနေဖြင့် ရွေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများကြောင့် အစ္စလာမ်ဘာသာကိုးကွယ်မှုသည် သိသိသာသာ မြင့်တက်လာခဲ့သည်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ်မှစ၍ မွတ်စလင်အစွန်းရောက်ဝါဒကြောင့် ဘာသာရေးအပေါ် စိုးရိမ်မှု မြင့်တက်လာခဲ့သည်။
၂၀၁၄ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် လွတ်လပ်သော အမ်စတာဒမ်တက္ကသိုလ်မှ တိုင်းတာလေ့လာချက်များအရ နယ်သာလန်နိုင်ငံတွင် ထာဝရဘုရားအား ယုံကြည်သူ(၁၇%)ထက် ထာဝရဘုရားအား မယုံကြည်သူ(၂၅%) ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ပိုတိုးလာကြောင်း လေ့လာသုံးသပ်ထားသည်။ လူဦးရေအများစုသည် ကင်္ခါဝါဒီ(ဘုရားတည်ရှိမှုကို သံသယရှိသူ)(၃၁%) သို့မဟုတ် ietsistic (27%) ရှိ၍နေပြီဖြစ်သည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် နယ်သာလန်နိုင်ငံ၏ အဓိကနေထိုင်သူ အများစု(၈၂%)သည် ဘုရားကျောင်းကို ဘယ်တော့မျှ သို့မဟုတ် ဘယ်တော့မျှနီးပါးအခြေအနေထိ ဘုရားကျောင်းကို မ‌သွားဘူးခဲ့ကြောင်း ပြောဆိုထားပြီး ၅၉% သည် မည်သည့်ဘုရားကျောင်း အမျိုးအစားကိုမဆို ဘယ်တော့မျှ မရောက်ဘူးကြောင်း ဖော်ပြထားကြသည်။ လူအားလုံးအား မေးမြန်းခဲ့ပြီးနောက် သူတို့ကို သူတို့ ဘုရားမဲ့ဝါဒီရှိသူဟု မြင်သူ ၂၄% ရှိပြီး ယခင် ၂၀၀၆ ခုနှစ် လေ့လာခဲ့မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ၁၁% မျှ တိုး၍လာခဲ့သည်။ မျှော်မှန်းထားသော ဘာသာရေးယုံကြည်မှု မြင့်တက်မှုသည် ၂၀၁၅ ခုနှစ်‌တွင် သု‌တေသနပြုချက်များအရ ရပ်တန့်သည့် အခြေအနေသို့ ရောက်ရှိသွားသည်။ ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် ၄၀% သော ‌စစ်တမ်းဖြေကြားသူတို့က ဘာသာရေးယုံကြည်မှုရှိသူ(ietsism)ဟု ယူဆကြောင်းဖြေဆိုခဲ့ပြီး ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်တော့ ၃၁% ထိ လျော့ကျသွားသည်။ ကြီးမြတ်သောစွမ်းအား၏ ဖြစ်တည်မှုပဓာန(existentialism)ကို ယုံကြည်မှုအရေအတွက်မှာလည်း ထိုကာလအတွင်း ၃၆% မှ ၂၈% သိူ့ ကျဆင်းသွားသည်။
နယ်သာလန်နိုင်ငံတွင်ခရစ်ယာန်ဘာသာမှာ လက်ရှိတွင် ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှု အများဆုံးသော ဘာသာဖြစ်သည်။ ‌မြောက် ဘရာဘန့်ပြည်နယ်နှင့် လင်းဘာ့ဂ်ပြည်နယ်တို့သည် သမိုင်းကြောင်းအရ ရိုမန်ကက်သလစ်ကို နှစ်နှစ်ကာကာ သက်ဝင်ယုံကြည်သူများဖြစ်ပြီး ထိုပြည်နယ်သားအချို့သည် ကက်သလစ်ဘုရားကျောင်းတော်သည် ၎င်းတို့၏ ယဉ်ကျေးမှု အမှတ်သရုပ်တည်ရာအဖြစ် မှတ်ယူကြ‌သေးသည်။ နယ်သာလန်နိုင်ငံရှိ ပရိုတက်စတင့်ဝါဒသည် မတူကွဲပြားသော ရိုးရာများအတွင်း ကျောင်းတော်တချို့ ပါဝင်သည်။ ထို့အထဲမှ အကြီးမားဆုံးဆုံးမှာ နယ်သာလန် ပရိုတက်စတင့် ဘုရားကျောင်း(Proteststant Church in Netherlands၊ PKN)ဖြစ်ပြီး ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကျောင်းတော်နှင့် ရိုးရာအရပြောင်းလဲမှုပြုထားသော လူသာရန်ဘုရားကျောင်းတော်တို့ကို ပေါင်းစည်းထားသော ကျောင်းတော်ဖြစ်သည်။ ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင်မှ ဒတ်ချ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကျောင်းတော်(Dutch Reformed Church)၊ နယ်သာလန်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဘုရားကျောင်းများ(the Reformed Churches in the Netherlands)နှင့် လူသာရန်ကျောင်းတော်တို့ ပေါင်းစည်းမှုမှ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ များစွာသော အော်သို့ဒေါ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဘုရားကျောင်းများနှင့် လစ်ဘရယ်ဘုရားကျောင်းများသည် PKN အတွင်းသို့ ပေါင်းစည်းခြင်း မပြုကြချေ။ နယ်သာလန်နိုင်ငံတွင် ခရစ်ယာန်ဘာသာတစ်ခုလုံးအနေဖြင့် အနည်းစုဖြစ်လာသော်လည်း နယ်သာလန်နိုင်ငံတွင် ဇီးလန်းမှ မြောက်ဘက် အိုဗီးရိုက်ဆယ်ပြည်နယ်အထိ ကျယ်ပြန့်သော ခရစ်ယာန်ခါးပတ်ကွင်းရှိ၍နေပြီး ထို‌‌ဒေသတို့တွင် ပရိုတက်စတင့်(အထူးသဖြင့် ပြုပြင်ရေးဘုရားကျောင်း)အား ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုမှာ ပြင်ထန်နေဆဲဖြစ်ပြီး မြူနီစပါယ်ကောင်စီတွင် အဓိကဘာသာ ဖြစ်၍နေသေးသည်။
အစွစလာမ်ဘာသာသည် နိုင်ငံအတွင်း ဒုတိယ ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှု အများဆုံးဖြစ်သည်။၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် နယ်သာလန်နိုင်ငံ၌ မွတ်စလင်အရေအတွက်မှာ ၈၂၅,၀၀၀(စုစုပေါင်း လူဦးရေ၏ ၅%) ရှိသည်။ ရွေ့ပြောင်းလုပ်သားများ များပြားလာမှု၏ အကျိုးရလဒ်အဖြစ် ၁၉၆၀ခုနှစ်မှစ၍ မွတ်စလင်လူဦးရေမှာ တိုးတက်၍ လာခဲ့သည်။ ထိုထဲတွင် တူရကီနှင့် မော်ရိုကိုတို့မှ ရွေ့ပြောင်းလုပ်သားများနှင့် ယခင်ဒတ်ချ်,ကိုလိုနီနယ်များဖြစ်ကြသည့် ဆူရီနမ်နှင့် အင်ဒိုနီးရှားတို့မှ ရွေ့ပြောင်းလုပ်သားများလည်း ပါဝင်ကြသည်။ ၁၉၉၀ ခုနှစ်များအတွင်းတွင် ဘော့စနီးယားနှင့် ဟက်ဇာဂိုဗေးနီးယား၊ အီရန်၊ အီရတ်၊ ဆိုမာလီယာနှင့် အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံတို့မှ ဒုက္ခသည်များလည်း ရောက်ရှိ၍ လာခဲ့သေးသည်။
အခြားသော ဘာသာတရားတို့မှာ ဒတ်ချ်လူဦးရေ၏ ၆% လောက်သာရှိသည်။ ဟိန္ဒူဘာသာမှာ နယ်သာလန်နိုင်ငံတွင် အနည်းငယ်သာ ကိုးကွယ်သော ဘာသာတရားဖြစ်ပြီး ယုံကြည်ကိုးကွယ်သူ ၂၁၅,၀၀၀(လူဦးရေ ၁% ထက် အနည်းငယ်ပို) ရှိပြီး အများစုမှာ အင်ဒို-ဆူရီနမ်လူမျိုးများဖြစ်သည်။ ကိုးကွယ်သူများတွင် အိန္ဒိယနှင် သီရိလင်္ကာတို့မှာရွေ့ပြောင်းလာသူများနှင့် ဟာရီ ခရစ်ရှနား(Hare Krishna)ကဲ့သို့ ပြောင်းလဲထားသော ဟိန္ဒူဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြသော အနောက်တိုင်းသားတို့လည်း ပမာဏတော်တော်များများ ပါဝင်ကြသည်။ နယ်သာလန်နိုင်ငံတွင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် သို့မဟုတ် နှစ်နှစ်ကာကာ ယုံကြည်နေသူသည် ခန့်မှန်း ၂၅၀,၀၀၀ ရှိသည်။ ဂျူးဘာသာအနေဖြင့် နယ်သာလန်နိုင်ငံတွင် ၄၅,၀၀၀ ခန့်ရှိသည်။
နယ်သာလန်နိုင်ငံ၏ ပညာရေးသည် အသက် ၅ နှစ်မှ ၁၆ နှစ်အကြား မသင်မနေရ ပညာရေးစနစ်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ကလေးမှာ HAVO, VWO သို့မဟုတ် MBO 2+ ဒီဂရီကဲ့သို့‌သော အခြေခံအရည်အချင်း သတ်မှတ်ချက် မရှိပါက ထိုကလေးသည် မဖြစ်မနေ ထိုအရည်အချင်း သတ်မှတ်ချက်ရရှိအောင် သင်ကြားရမည် ဖြစ်သည်။
နယ်သာလန်နိုင်ငံရှိ ‌ကလေးသူငယ်တိုင်းသည် အခြေခံပညာကျောင်းကို အသက် ၄ နှစ်မှ ၁၂ အတွင်း သင်ကြားကြရပြီး အတန်း ၈ ခု ပါဝင်သည်။ ပင်ကိုယ်ပါရမီ စမ်းသပ်မှုအပေါ် အခြေခံ၍ အဋ္ဌမတန်းမှဆရာ၏ မှတ်ချက်နှင့် ကျောင်းသားမိဘ သို့မဟုတ် အုပ်ထိန်းသူ၏ အမြင်ဖြင့် အလယ်တန်းသင်ရိုး ၃ ခုမှ တစ်ခုကို ရွေးချယ်ရသည်။ သီးခြားသင်ရိုးဖြင့် သင်ကြားပြီးသည့်နောက် နောက်ဆုံးနှစ်မတိုင်မီ တစ်နှစ်အလိုတွင် ကျောင်းသားသည် နောက်ထပ်သင်ရိုးကို ဆက်လက်သင်ကြားနိုင်သည်။
VMBO တွင် အတန်း ၄ ခု ပါဝင်ပြီး အခြားသော အဆင့်ခွဲများစွာရှိသည်။ VMBO အတန်းများအား အောင်မြင်ပြီးသည်နှင့် MBO အတန်းများအား ဆက်လက် တက်ရောက်နိုင်သည်။ MBO (middle-level applied education) သည် လက်တွေ့အသုံးချ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပညာရပ်များကို အဓိကထား သင်ကြားသော ပုံစံဖြစ်သည်။ MBO အောင်မြင်သည့် လတ်မှတ်ရှိသော ကျောင်းသားသည်သာ HBO ကို ‌‌တက်ရောက်ခွင့်ရှိမည် ဖြစ်သည်။ HAVO သည် အတန်း ၅ ခုရှိပြီး အောင်မြင်ပါက HBO ကို တက်ရောက်ခွင့် ရရှိမည် ဖြစ်သည်။ HBO(higher professional education) သည် တက္ကသိုလ် ပညာရေး(အသုံးချ သိပ္ပံ)ဖြစ်ပြီး အောင်မြင်ပါက သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်အဘိုက် ဘွဲ့ဒီဂရီကို ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် တက္ကသိုလ်အဆင့်ဘွဲ့နှင့် တူညီသည်။ VWO (comprising athenaeum and gymnasium) တွင် အတန်း ၆ ခုပါဝင်ပြီး သုတေသနတက္ကသိုလ်များတွင် သင်ကြားနိုင်ရေးအတွက် အကြိုပြင်ဆင်ခြင်း ဖြစ်သည်။ တက္ကသိုလ်တွင် သုံးနှစ်ကြာမြင့်သော ဘွဲ့ဒီဂရီကို သင်ကြားနိုင်ပြီး ၎င်းနောက် တစ်နှစ် သို့မဟုတ် နှစ်နှစ် ကြာသော ဘွဲ့လွန်ကို ဆက်လက်သင်ကြားနိုင်သည်။ ထိုသို့သင်ကြားပြီးပါက လေးနှစ် သို့မဟုတ် ငါးနှစ်ကြာမြင့်သော ပါရဂူဘွဲ့သင်တန်းကို ဆက်လက်သင်ကြားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
နယ်သာလန်နိုင်ငံတွင် ပါရဂူဘွဲ့ သင်တန်းသားများသည် ယေဘုယျအားဖြင့် တက္ကသိုလ်၏ အမြဲတမ်းခန့် ဝန်ထမ်းများတော့ မဟုတ်ချေ။ အများပြည်သူရံပုံ​ငွေဖြင့် အသုံးပြု​သော ဘာသာ​ရေး​ကျောင်းများမှလွဲ၍ ဒတ်ချ် ​ကျောင်းနှင့် တက္ကသိုလ်များသည် အများပြည်သူတက္ကသိုလ်များဖြစ်ပြီး ဘုရား​ကျောင်းများကိုလည်း နိုင်ငံ​တော်မှ စီမံခန့်ခွဲခြင်း မဟုတ်ပဲ လိုအပ်သည်များဖြည့်ဆည်းခြင်းဖြစ်သည်။ ဒတ်ချ်တက္ကသိုလ်များတွင် ကျူရှင်ခသည် နယ်သာလန်​နှင့် ယူရိုအဖွဲ့ဝင်ကျောင်းသားများအတွက် တနှစ်တာကုန်ကျ​ငွေ ယူရို ၂၀၀၀ ခန့် ရှိပြီး ယူရိုအဖွဲ့ဝင် မဟုတ်​သော နိုင်ငံများအတွက်မူ ယူရို ၁၀,၀၀၀ ခန့် ကုန်ကျသည်။
၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် နယ်သာလန်နိုင်ငံသည် Euro health consumer index (EHCI)၏ နံပါတ် ၁ နေရာကို ဆက်လက်ရရှိခဲ့သည်။ ၎င်းညွှန်းကိန်းသည် ဥရောပရှိ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစနစ်များကို လေ့လာခြင်းဖြစ်ပြီး အမြင့်ဆုံးအမှတ် ၁,၀၀၀ တွင် ၉၁၆ မှတ်ရရှိခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် နယ်သာလန်နိုင်ငံသည် ၂၀၀၅ ခုနှစ်ကတည်းက ထုတ်ပြန်ခဲ့သော စစ်တမ်းတို့တွင် ထိပ်ဆုံးသုံးနိုင်ငံအနက် ပါဝင်ခဲ့သည်။ တိုင်းတာစစ်ဆေးမှု ၄၈ မျိုးတွင် ပါဝင်သည့် လူနာအခွင့်အရေး၊ သတင်းအချက်အလက်၊ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုနှင့် အကျိုးရလဒ်တို့တွင် နယ်သာလန်နိုင်ငံသည် ဥရောပ ၃၇ နိုင်ငံတွင် ထိပ်ဆုံးနိုင်ငံအဖြစ် ၆ နှစ်ဆက်တိုက် အသိအမှတ်ပြုခြင်းကို ခံထားရသည်။ ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း၊ ဩစတေးလျ၊ ကနေဒါ၊ ဂျာမနီ၊ နယူးဇီလန်တို့နှင့် ကျန်း‌မာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့်ပတ်သက်သော နှိုင်းယှဉ်လေ့လာမှုတစ်ရပ်တွင် ပထမနေရာတွင် ရှိနေခဲ့သည်။
၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ ကြီးမားသော ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ ပြုလုပ်ပြီးကတည်းကပင် ဒတ်ချ်တို့၏ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစနစ်သည် နှစ်စဉ် ညွှန်းကိန်းများ၌ ပိုမိုများပြားသော အမှတ်များကို ရရှိခဲ့သည်။ HCP (Health Consumer Powerhouse) ၏ အဆိုအရ နယ်သာလန်နိုင်ငံတွင် 'ပရမ်းပတာဖြစ်သော စနစ်' ရှိပြီး ဆိုလိုသည်မှာ လူနာ၌ သူ၏ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအတွက် ကျန်းမာရေးအာမခံအား လွတ်လပ်စွာဝယ်ယူနိုင်မှု ကြီးမားစွာ ရရှိထားခြင်းဖြစ်သည်။ နယ်သာလန်နိုင်ငံနှင့် အခြားသောနိုင်ငံတို့နှင့် ကွာခြားချက်မှာ ထိုပရမ်းပတာဖြစ်မှု(လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်နိုင်ခွင့်)ကို အစီအစဉ်တကျဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့်ပတ်သက်သော ဆုဲးဖြတ်ချက်များသည် လူနာနှင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ဝန်ဆောင်မှုပေးသူအကြား ပြောဆိုဆွေးနွေးမှုအတွင်းတွင် ပြုလုပ်နိုင်သည်။
ကျန်းမာရေး‌အာမခံသည် နယ်သာလန်နိုင်ငံ၌ ဥပဒေအရ မဖြစ်မနေလုပ်ကြရသည်။ နယ်သာလန်နိုင်ငံ၌ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအား ဥပဒေအရ အာမခံပုံစံနှစ်ခုဖြင့် လွှမ်းခြုံထားသည်။
•Zorgverzekeringswet (ZVW)၊ "အခြေခံ အာမခံ" ဖြစ်ပြီး အထွေထွေ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ဖြစ်သည်။
•Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) သည် ကာလရှည် ပြုစုစောင့်ရှောက်မှု ဖြစ်သည်။
ဒတ်ချ်နိုင်ငံသားများအတွက် AWBZ အာမခံသည် အစိုးရမှ အလိုအလျောက် အာမခံပေးထားပြီး အခြေခံကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကိုတော့ လူတိုင်းအနေဖြင့် ချုပ်ဆိုရန် လိုအပ်သည်။ အသက် ၁၈ နှစ်အောက် ကလေးများအနေဖြင့် ၎င်းတို့၏ မိဘအာမခံနှင့်ပင် အလိုအလျောက် အကျုံးဝင်သည်။ အကယ်၍ တစ်ဦးတစ်ယောက်အနေဖြင့် အာမခံ မယူလိုပါက ၎င်းသည် ‌ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ရမည်။ အာမခံကုမ္ပဏီအနေဖြင့် အသက် ၁၈ နှစ်ကျော်လွန်သူ လူတိုင်းအတွက် အသက်အရွယ်နှင့် ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို မမှီတည်သည့် အထွေထွေကျန်းမာရေး အာမခံပုံစံများ ပေးရပြီး လျှောက်ထားခွင့် ငြင်းပယ်ခြင်းနှင့် အထူးအခြေအနေတစ်ရပ်ပြဋ္ဌာန်းခြင်းသည် တရားမဝင်သော ကိစ္စရပ်များ ဖြစ်သည်။ တခြားသော ဥရောပနိုင်ငံများနှင့်မတူသည်မှာတော့ ဒတ်ချ်အစိုးရသည် လွယ်ကူ​စေမှုနှင့် ကျန်းမာ​ရေး​စောင့်​ရှောက်မှုစနစ်၏ အရည်အ​သွေးများအတွက် တာဝန်ခံမှုရှိပြီး စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် မပါဝင်ပေ။
နယ်သာလန်၏ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကို နည်းလမ်းများစွာဖြင့် ခွဲခြားနိုင်ပြီး somatic နှင့် စိတ်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့် 'ကုသခြင်း'(ကာလတို)၊ 'စောင့်ရှောက်မှု'(ကာလရှည်)တွင် အဆင့် သုံးဆင့် ခွဲခြားထားသည်။ မိသားစုဆရာဝန်များ(huisartsen)သည် ပထမအဆင့်၏ အကြီးမားဆုံး အစိတ်အပိုင်းများအဖြစ် ဖွဲ့စည်းထားကြသည်။ ပထမအဆင့်မှ အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်၏ ညွန်းဆိုမှုရှိမှသာ ဒုတိယနှင့် တတိယအဆင့်အတွက် လက်ခံရန် လုပ်ဆောင်ခွင့်ရှိသည်။ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစနစ်သည် အခြားသော ဥရောပနိုင်ငံများနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင်အတော်လေးထိရောက်မှုရှိသော်လည်း ကုန်ကျစရိတ် ထိရောက်မှုအရှိဆုံးသော စနစ်တော့ မဟုတ်ပါ။
နယ်သာလန်နိုင်ငံ၏ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစနစ်သည် လမ်းနှစ်သွယ်စနစ်ဖြင့် ဘဏ္ဍာ‌ငွေသုံးစွဲသည်စနစ်ကို ၂၀၀၆ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီမှ စတင်ကျင့်သုံးခဲ့သည်။ တစ်စိတ်တပိုင်းဆေးရုံနေနှင့် ဘီးတပ်ကုလားထိုင်အစရှိသော မသန်စွမ်းကုန်ကျစရိတ်ကဲ့သို့ ကာလရှည်ကုသမှုတို့တွင် နိုင်ငံတော်မှထိန်းချုပ်သော အာမခံခွင့်ပြုမှုနှင့် ကုသခွင့်ပေးထားသည်။ ၎င်းသည် Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten ("General Law on Exceptional Healthcare Costs") ခေါင်းစဉ်အောက်တွင်ရှိပြီး ၁၉၆၈ ခုနှစ်တွင်မှစ၍ ပထမဆုံးအသက်သွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင်စ၍ အာမခံသည် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကုန်ကျ‌ငွေ၏ ၂၇%ကို ကုန်ကျခံပေးခဲ့သည်။
ပုံမှန်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု(ကာလတို)အားလုံးအတွက်သည် ပုဂ္ဂလိက ကျန်းမာရေးအာမခံကုမ္ပဏီများ၏ မဖြစ်မနေထားရှိရသော ကျန်းမာရေးအာမခံစနစ်တွင် ဖြစ်သည်။ ဤကျန်းမာရေးအာမခံကုမ္ပဏီများကို တိကျသေချာသော အာမခံကုသမှုအမျိုးအစားအလိုက် ထောက်ပံ့ပေးရန် မဖြစ်မနေ လုပ်‌ဆောင်စေရသည်။ အာမခံသည် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု အားလုံးကုန်ကျငွေ၏ ၄၁% ကို ထောက်ပံ့ပေးရသည်။
ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ငွေပေးချေမှု၏ အခြားသော ရင်းမြစ်များမှာ အခွန်(၁၄%)၊ တိုက်ရိုက်‌ငွေချေမှု(out of pocket payments) (၉%)၊ ထပ်တိုးစိတ်ကြိုက် ကျန်းမာရေးအာမခံအမျိုးအစား (၄%)နှင့် အခြားသော ရင်းမြစ်(range of other sources)(၄%) တို့ဖြစ်သည်။  လက်ခံနိုင်မှု(affordablility)ကို ဝင်‌ငွေနှင့်ဆက်စပ်သော ကင်းလွတ်ခွင့်စနစ်နှင့် သီးခြားနှင့် အလုပ်သမားများမှ ပေးချေသော ဝင်ငွေနှင့် ဆင်စပ်သော ပရီမီယံတို့မှ အာမခံပေးသည်။
ဒတ်ချ်ကျန်းမာရေးစနစ်၏ အဓိကအကြောင်းအရာမှာအာမခံပရီမီယံမှာ ကျန်းမာရေးအခြေအနေနှင့် အသက်အရွယ်ကို ဆက်နွယ်မှု မရှိခြင်းဖြစ်သည်။ ကာလတို ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု အားလုံးအတွက် ကုန်ကျစရိတ်ကို အာမခံကုမ္ပဏီမှ ၅၀%၊ အာမခံထားသူမှ ၄၅%နှင့် အစိုးရမှ ၅% ပေးဆောင်သည်။ အသက် ၁၈ နှစ်အောက် ကလေးငယ်များအား အခမဲ့ လွှမ်းခြုံမှုပေးထားသည်။ အာမခံကုမ္ပဏီများမှ အာမခံကြေးပေးချေမှုသည် တစ်လလျှင် ယူရို ၁၀၀ (၂၀၁၀ ဩဂုတ်တွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၂၇ ခန့်နှင့် ၂၀၁၂ တွင် ယူရို ၁၅၀ သို့မဟုတ် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၉၆၊ မတူကွဲပြားသော အာမခံကုမ္ပဏီများအကြား ကွဲပြားမှု ၅ % ခန့်)ရှိပြီး နှစ်စဉ် အခွန်မဆောင်မီပေးချေရမှုသည် ယူရို ၂၂၀(အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၈၈)ခန့်ရှိသည်။
ဒတ်ချ် ယဉ်ကျေးမှု၏ လက္ခဏာနှင့် ပြယုဂ်အချို့
အနုပညာ၊ ဒဿနိကဗေဒနှင့် စာပေပြင်ဆင်
ဂျိုဟန်နက် ဗာမီယာ၏ ပုလဲနားဆွဲနဲ့ မိန်းကလေး
ဗင်းဆင့် ဗန်ဂိုး၏ ကိုယ်တိုင်ရေးပုံတူ
နယ်သာလန်နိုင်ငံသည် ပန်းချီဆရာကျော်များစွာ နေထိုင်ခဲ့ဖူးသော နိုင်ငံတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ၁၇ ရာစုတွင် ဒတ်ချ်သမ္မတနိုင်ငံ ခေတ်ကောင်းရောက်ရှိစဉ်အချိန်က များစွာသော ပန်းချီဆရာများဖြစ်သည့် ရမ်းဗရန့်၊ ဂျိုဟန်နက် ဗာမီယာ၊ ဂျန် စတင်း(Jan Steen)၊ ဂျက်ကော့ ဗန် ရူအစ်ဒယ်(Jacob van Ruisdael) အစရှိသော ပန်းချီဆရာများစွာ ပေါ်ထွန်းခဲ့သည်။ ဗင်းဆင့် ဗန်ဂိုး၊ ပင်တာ မွန်ဒရီယွန်တို့သည် ၁၉ ရာစုနှင့် ၂၀ ရာစုတွင် ကျော်ကြားခဲ့သော ဒတ်ချ် ပန်းချီဆရာများဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် မော်ရစ် ကော်နယ်လစ် အက်ရှာ(M. C. Escher)ကဲ့သို့ ကျော်ကြားသော ဂရပ်ဖစ် ပညာရှင်များလည်းရှိသည်။ ဝီလျံ ဒီ ကော်နင်း(Willem de Kooning)သည် ရော်တာဒမ်မြို့တွင် မွေးဖွား၍ သင်ကြားခဲ့သော်လည်း အမေရိကန်အနုပညာရှင်တစ်ယောက်အဖြစ် ခံယူထားသူ ဖြစ်သည်။
နယ်သာလန်နိုင်ငံသည် ရော်တာဒမ်မြို့မှ အီရက်ဇမတ်နှင့် ဆပင်နိုဇာကဲ့သို့သော ဒဿနိကပညာရှင်များ ပေါ်ထွန်းရာ မြေလည်း ဖြစ်သည်။ ဒေးကား၏ အရေးပါသော အတွေးအခေါ်များသည်လည်း နယ်သာလန်နိုင်ငံ၌ ၎င်း လေဒင့်တက္ကသိုလ်တွင် ပညာသင်စဉ်တွင် ဖော်ထုတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ရာစုနှစ်များစွာအတွင်း ထိုတက္ကသိုလ်တွင် ပထဝီပညာရှင် ဂျိမ်း ဟတ်တန်(James Hutton)၊ ဗြိတိသျှဝန်ကြီးချုပ် ဂျွန် စတူးအတ် (John Stuart)၊ အမေရိကန်သမ္မတ ဂျွန် ကွင်စီ အဒမ်စ်၊ ရူပဗေဒဆိုင်ရာ နိုဘယ်ဆုရှင်များ ဖြစ်ကျသော ဟန်းဒရစ် လိုရန်ဇ်(Hendrik Lorentz) နှင့် အန်ရီကို ဖာမီ(Enrico Fermi) တို့ ပညာသင်ကြားခဲ့ကြသည်။ ဒတ်ချ် သိပ္ပံပညာရှင် ခရစ္စတင်းယန်း ဟေဂန်(Christiaan Huygens)(၁၆၂၉–၁၆၉၅) သည် စေတန်ဂြိုဟ်၏ ဂြိုဟ်ရံလဖြစ်သော တိုင်တန်လကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီး အလင်းသည် လှိုင်းသဏ္ဍန်ဖြင့် သွားသည်ဟု ယုံကြည်စွာ ငြင်းဆိုခဲ့သူ ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် ချိန်သီးနာရီကို တီထွင်ခဲ့ပြီး သင်္ချာညီမျှခြင်းများကို အသုံးပြုခဲ့သော ပထမဆုံးသော ရူပဗေဒပညာရှင်လည်းဖြစ်သည်။ အန်တိုနီ ဗန် လေဗင်ဟုပ်(Antonie van Leeuwenhoek) သည် မိုက်ခရိုစကုပ်ဖြင့် ကြည့်၍မြင်နိုင်သော ဆဲလ်တစ်လုံးတည်းရှိသော သက်ရှိများ အကြောင်းကို ပထမဆုံး တွေ့ရှိ ဖော်ထုတ်ခဲ့သူ ဖြစ်သည်။
ဒတ်ချ်ရွှေခေတ်တွင် အခြားသော အနုပညာလက်ရာများနှင့်အတူ ယော့ ဗန် ဒန် ဗွန်ဒယ်(Joost van den Vondel) နှင့် ပီတာ ကော်နယ်လစ်ဇွန် ဟော့(P. C. Hooft) တို့၏ လက်ရာများဖြင့် စာပေသည်လည်း ကျော်ဇောခြင်းအတိ ရှိခဲ့လေသည်။ ၁၉ ရာစုတွင်လည်း မူတာတူလီ(Multatuli) ရေးသည့် ယခုအခါ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဖြစ်လာသည့် ဒတ်ချ်ကိုလိုနီနယ်များတွင် ဆိုးရွားစွာ ပြုမူဆက်ဆံခဲ့သည်တို့ကို ရေးသားခဲ့သော စာများသည်လည်း ထင်ရှားသည်။ ၂၀ ရာစုတွင် ထင်ရှားသော စာရေးဆရာများတွင် ဂေါ့ဒ်ဖရီး ဘိုးမန်း(Godfried Bomans)၊ ဟာရီ မူလစ်ချ်(Harry Mulisch)၊ ယန် ဝေါကာ(Jan Wolkers)၊ ဆိုင်မွန် ဗက်ဒေ့(Simon Vestdijk)၊ ဟယ်လာ ဟာဆယ်(Hella S. Haasse)၊ ဆီး နိုတီဘွန်း(Cees Nooteboom)၊Gerard Reve နှင့် ဝီလျံ ဖရက်ဒရစ် ဟားမန်း(Willem Frederik Hermans) တို့ ပါဝင်သည်။ ဂျူးလူမျိုးတို့ မျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုဖြစ်စဉ်အတွင်းတွင် အသတ်ခံခဲ့ရသော အာနယ်ဖရန့်ခ်၏ Diary ofaYoung Girl သည် ထင်ရှားသော စာအုပ်တစ်အုပ်ဖြစ်ပြီး ဒတ်ချ်ဘာသာမှ အခြားသော ထင်ရှားသော ဘာသာတို့ဖြင့် ပြန်ဆိုထုတ်ဝေခဲ့သော စာအုပ်တစ်အုပ်ဖြစ်သည်။
ဒတ်ချ်ရိုးရာဗိသုကာလက်ရာများကို အမ်စတာဒမ်မြို၊ လေဒင့်မြို့(Leiden)၊ ဒဲ့ဖ်မြို့(Delft)တို့တွင် ကောင်းစွာ ထိန်းသိမ်းထားပြီး တူးမြောင်းများတစ်လျှောက်တွင် ၁၇ ရာစုနှင့် ၁၈ ရာစုမှအဆောက်အဦများကို တွေ့မြင်နိုင်သည်။ သစ်ဖြင့်ဆောက်လုပ်ထားသော ကျေးလက်ဗိသုကာလက်ရာများကို ဇာအမ်ဒမ်မြို့(Zaandam) နှင့် မာကန်ရွာ(Marken) တို့တွင် တွေ့နိုင်သည်။ ဒတ်ချ် အဆောက်အဦများ၏ ပုံတူလက်ရာများကို ဂျပန်နိုင်ငံ၊ နာဂါဆာကီမြို့ရှိ Huis Ten Bosch ပန်းခြံတွင် တွေ့ရှိနိုင်သည်။ ဟော်လန်ရွာငယ်ပုံစံကို တရုတ်နိုင်ငံ၊ ရှန်ယန်းမြို့တွင် တည်ဆောက်ပြီးစီးလျက်ရှိသည်။ လေရဟတ်၊ ကျူးလစ်ပန်း၊ သစ်သားရှူးဖိနပ်၊ ဒဲ့ဖ် အိုးထည်များနှင့် ဆေးခြောက်ပင် (cannabis) တို့သည် နယ်သာလန်နိုင်ငံကို လာရောက်လည်ပတ်ကြသော ခရီးသွား ဧည့်သည်များအကြားတွင် ရေပန်းစားသော အ‌ကြောင်းအရာများ ဖြစ်သည်။
နယ်သာလန်နိုင်ငံတွင် တင်းကျပ်သည့် လူမှုရေးဆိုင်ရာ ရှည်လျားသော သမိုင်းများရှိ‌ခဲ့သော်ငြား ယနေ့အခါတွင် မူးယစ်ဆေးနှင့် သက်ဆိုင်သော မူဝါဒ၊ ညင်သာစွာ သေဆုံးခြင်းအား တရားဝင် ခွင့်ပြုပေးမှုတို့ကြောင့် လွတ်လပ်သော လစ်ဘရယ်နိုင်ငံတစ်ခုအဖြစ် ဆို၍ ရနေပြီဖြစ်သည်။ ၂၀၀၁ ခုနှစ် ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့တွင် လိင်တူခြင်း လက်ထပ်ထိန်းမြှားခြင်းအား တရားဝင်ခွင့်ပြုပေးခဲ့ပြီး လိင်တူလက်ထပ်ခြင်းအား ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည့် ပထမဆုံးသောနိုင်ငံဖြစ်လာခဲ့သည်။
တခြားသောနှစ်များ အနေဖြင့်လည်းကောင်း ၂၀၁၈ ခုနှစ် အနေဖြင့်ပါ နယ်သာလန်နိုင်ငံသည် နိုင်ငံသားတစ်ဦးချင်းစီအလိုက်ဖြင့် ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုသည် ဥရောပသမဂ္ဂနိုင်ငံများတွင် ထုတ်လွှတ်မှု အများဆုံး‌သော နိုင်ငံများထဲတွင်ပါဝင်ပြီး ဂျာမနီနိုင်ငံ၊ ပြင်သစ်နိုင်ငံ သို့မဟုတ် ဘယ်လ်ဂျီယမ်နိုင်ငံတို့ထက်ပင် မြင့်မားသည်။  သို့ပေသော်ငြား နယ်သာလန်နိုင်ငံသည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် လူဦးရေ စီမံခန့်ခွဲမှု(population management)တွင် ဦးဆောင်နိုင်ငံတစ်ခုအဖြစ် ဂုဏ်သတင်း ကျော်ကြားဆဲပင် ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် အမ်စတာဒမ်မြို့နှင့် ရော်တာဒမ်မြို့တို့သည် Arcadis Sustainable Cities Index တွင် အဆင့် ၄ နှင့် ၅ အသီးသီး ရရှိခဲ့သည်။
Sustainability သည် ဒတ်ချ်လူမျိုးတို့အတွက် ပဓာနအရေးပါသော ကိစ္စရပ်ဖြစ်သည်။ ဒတ်ချ်အစိုးရ၏ ရည်မှန်းချက်မှာ ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးရေး၊ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့် မျှတသော စွမ်းအင်စနစ်တို့ဖြစ်ပြီး ၂၀၅၀ ခုနှစ်တွင် ကာဗွန်အောက်ဆိုဒ် ထုတ်လွတ်မှုကို ထက်ဝက်ထိလျော့ချရေးနှင့် ပြန်ပြည့်ဖြိုးမြဲ စွမ်းအင်မှ ၄၀ ရာနှုန်းထိ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်နိုင်ရေးတို့ ပါဝင်သည်။
အစိုးရသည် လေ့လွင့်မှုနည်းသော ထိရောက်သည့် စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု(energy efficency)၊ ပြန်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်နှင့် ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်လျော့ချရေးတွင် ယူရိုဘီလျံနှင့်ချီ ရင်းနှီးမြုပ်နှံခဲ့သည်။ နိုင်ငံတော်အနေဖြင့် ဒတ်ချ်ကုမ္ပဏီများအား sustainable business/projects/facilities များတည်ဆောက်ရန် တိုက်တွန်းထားပြီး နိုင်ငံတော်မှ ဘဏ္ဏာရေးအကူအညီများပေးသည့်အပြင် စိတ်ဝင်စားသူများမှလည်း တသီးပုဂ္ဂလိကအနေဖြင့်လည်း အကူအညီပေးလျက်ရှိသည်။
၁၉ ရာစုမှ တော်ဝင် ဂီတခန်းမ
နယ်သာလန်နိုင်ငံတွင် အမျိုးစုံသော ဂီတရိုးရာများ ရှိသည်။ ဒတ်ချ်ရိုးရာ ဂီတအမျိုအစားကို "Levenslied" ဟု ခေါ်ပြီး ဘဝရဲ့သီချင်း ဟု အဓိပ္ပာယ်ရသည်။ ဤသီချင်းများသည် ပုံမှန်အားဖြင့် ရိုးရှင်းသော တေးသွားနှင့် ရမ်သမ်ရှိပြီး ရိုးရှင်းသော နှစ်ကြောင်းဆက်ကာရန်နှင့် ကောရပ် ဖွဲ့စည်းပုံရှိသည်။ ပေါ့ပါးသော တေးသွားသံစဉ်ပုံစံရှိပြီး လွမ်းဆွက်တမ်းသသော တေးသွားပုံစံဖြစ်လည်း ရေးဖွဲ့လေ့ရှိကာ အချစ်အကြောင်း၊ သေခြင်းတရားနှင့် အထီးကျန်ဆန်မှုတို့အကြောင်းပါဝင်သည်။ အကော်ဒီယံနှင့် လေမှုတ်အော်ဂန်ကဲ့သို့သော ရိုးရာတူရိယာများသည် levenslied ဂီတအတွက် အဓိကကျသော တူရိယာများဖြစ်ပြီး နောက်ပိုင်းခေတ်များတွင် ဂီတပညာရှင်များသည် synthesiser များနှင့် ဂစ်တာများကို အသုံးပြု၍လာခဲ့သည်။ ယန် စမစ်(Jan Smit)၊ ဖရန့် ဘောင်အာ(Frans Bauer) နှင့် အန်ဒရဲ ဟာ့ဇ်(André Hazes) တို့သည် ဤဂီတအမျိုးအစားကို သီဆိုသူအနုပညာရှင်များထဲတွင် ပါဝင်ကြသည်။
ပေါ့ အဆိုတော် Anouk (၂၀၁၃ ခုနစ်)
အကြီးဆုံး ဒတ်ချ်ဂီတဖျော်ဖြေရေးကွင်း ဖြစ်သော Johan Cruyff Arena
ခေတ်ပေါ် ဒတ်ချ် ရော့ခ်နှင့် ပေါ့ပ်ဂီတ(Nederpop) တို့သည် ၁၉၆၀ ခုနှစ်များထွန်း ပေါ်ထွန်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ‌‌အမေရိကန်နှင့် ဗြိတိန်တို့၏ ခေတ်ပေါ်ဂီတတို့မှ ကြီးစွာလွှမ်းမိုးမှု ရှိခဲ့သည်။ ၁၉၆၀ ခုနှစ်များနှင့် ၇၀ ခုနှစ်များတွင် စာသားအားလုံးနီးပါးသည် အင်္ဂလိပ်စာသားများဖြင့်ပြီး အချို့သီချင်းများမှာ အတီးချည်းသပ်သပ်ဖြစ်သည်။ Shocking Blue၊ Golden Earring၊ Tee Set၊ George Baker Selection နှင့် Focus စသော တီးဝိုင်းအဖွဲ့များသည် နိုင်ငံတကာထိပါ အောင်မြင်မှုများ ရရှိခဲ့သည်။ ၁၉၈၀ ခုနှစ်များအရောက်တွင် အကြီးအကျယ် အောင်မြင်ခဲ့သည့် Doe Maar တီးဝိုင်းအဖွဲ့အား အတုယူ၍ များစွာသော ပေါ့ပ်ဂီတသမားများသည် ဒတ်ချ်ဘာသာဖြင့် စတင်ရေးဖွဲ့လာခဲ့ကြသည်။ ယနေ့အခါတွင် ဒတ်ချ် ရော့ခ်နှင့် ပေါ့ပ်ဂီတသည် ဘာသာစကားနှစ်ခုစလုံးဖြင့် ရှင်သန်၍လာခဲ့ပြီး အချို့သော အနုပညာရှင်များသည် ဘာသာစကားနှစ်ခုလုံးဖြင့်ပင် အသံသွင်းခြင်းများ ပြုလုပ်၍ လာခဲ့သည်။
လက်ရှိတွင် Symphonic metal တီးဝိုင်းအဖွဲ့များဖြစ်သော Epica, Delain, ReVamp, The Gathering, Asrai, Autumn, Ayreon and Within Temptation နှင့် ဂျက်စ်နှင့် ပေါ့ပ် အဆိုတော် Caro Emerald တို့သည် နိုင်ငံတကာ အောင်မြင်မှုများရနေသော အဖွဲ့များဖြစ်သည်။ မက်တယ်တီးဝိုင်းအဖွဲ့များဖြစ်သော Hail of Bullets, God Dethroned, Izegrim, Asphyx, Textures, Present Danger, Heidevolk and Slechtvalk တို့သည်လည်း ဥရောပ၏ အကြီးမားသော မက်တယ်ဂီတဖျော်ဖြေပွဲများတွင် ဝင်ရောက်တီးခတ်ကြသည့် အထူးဧည့်တီးဝိုင်းအဖွဲ့များ ဖြစ်ကြသည်။ ခေတ်ပြိုင် ဒေသတွင်း နာမည်ကျော်ကြားကြသူများတွင် ပေါ့ပ်အဆိုတော် Anouk၊ ကျေးလက်ပေါ့ပ်အဆိုတော် DeLange၊ South Guelderish နှင့် Limburgish ဘာသာစကားဖြင့်ဆိုသော Rowwen Hèze တီးဝိုင်းအဖွဲ့၊ ရော့ခ်ဂီတအဖွဲ့ဖြစ်သော BLØF နှင့် Nick & Simon အတွဲတို့ ပါဝင်ကြသည်။ စွယ်စုံရ အဆိုတော် တစ်ဦးဖြစ်သည့် Trijntje Oosterhuis သည် နိုင်ငံ၏ အကျော်ကြားဆုံးသော အနုပညာရှင်များထဲတွင်ပါဝင်ပြီး ကျော်ကြားသည့် အမေရိကန် တေးရေးဆရာများဖြစ်ကြသည့် Vince Mendoza and Burt Bacharach တို့နှင့်တွဲဖက်ပြီး အယ်ဘမ်များစွာ သီဆိုခဲ့သည်။
၁၉၉၀ ခုနှစ်များ အစောပိုင်းကာလတွင် ဒတ်ချ်နှင့် ဘယ်လဂျီယမ် house music တို့ပေါင်းစပ်ပြီး Eurodance ဟုခေါ်သော ဂီတအမျိုးအစား ပေါ်ပေါက်လာကာ2Unlimited ဟုခေါ်သော အဖွဲ့ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပြီး ဓာတ်ပြားအချပ်ရေ ၁၈ မီလီယံခန့် ရောင်းချခဲ့သည့် စာရင်းဝင်ခဲ့ရာ ထိုအဆိုတော်နှစ်ယောက်ပါဝင်သော တီးဝိုင်းအဖွဲ့သည် ယနေ့ထိ ဒတ်ချ် ဂီတသမိုင်းတွင် အအောင်မြင်ဆုံး ဖြစ်ခဲ့သည်။ "Get Ready for This" ကဲ့သို့သော သီချင်းမျိုးသည် ယနေ့အချိန်ထိ နာမည်ကျော်ကြားလျက်ရှိပြီး NHL ကဲ့သို့သော အမေရိကန် အားကစားပြိုင်ပွဲများတွင် အသုံးပြုဆဲပင်ဖြစ်သည်။ ၁၉၉၀ ခုနှစ်များ အလယ်ပိုင်းကာလတွင် ဒတ်ချ်ဘာသာဖြင့် ရပ်နှင့် ဟစ်ဟော့ဂီတ (Nederhop) များပေါ်ထွန်းလာခဲ့ပြီး နယ်သာလန်နှင့် ဘယ်လ်ဂျီယမ်နိုင်ငံတို့တွင် ကျော်ကြားလာခဲ့သည်။ ဤဂီတအမျိုးအစားတွင်မြောက်အာဖရိကန်၊ ကာရစ်ဘီယံ အနုပညာရှင်များမှ ကြီးစွာ လွှမ်းမိုးမှုရှိခဲ့သည်။
၁၉၉၀ ခုနှစ်များကတည်းကစပြီး Dutch electronic dance music (EDM) ကမ္ဘာအနှံသို့ trance, techno နှင့် gabber မှ hardstyle ထိ ပုံသဏ္ဌာန်အမျိုးမျိုးဖြင့် ပျံ့နှံခဲ့သည်။ နယ်သာလန်နိုင်ငံမှ ကမ္ဘာအကောင်းဆုံး dance music DJs သမားအချို့တွင် Armin van Buuren, Tiësto, Hardwell, Martin Garrix, Dash Berlin, Julian Jordan, Nicky Romero, W&W, Don Diablo and Afrojack တို့ပါဝင်ပြီး ရှေ့ဆုံး လေးယောက်မှာ ကမ္ဘာအကောင်းဆုံးသော ဒီဂျေသမားများစာရင်းဖြစ်သည့် DJ Mag Top 100 DJs တွင် ပါဝင်ကြသည်။ Amsterdam Dance Event (ADE) သည့် ကမ္ဘာ့အကြီးကျယ်ဆုံးသော electronics music conference ဖြစ်ပြီး အီလက်ထရောနစ်ဂီတနှင့် ၎င်း၏မျိုးကွဲများစွာအတွက် အကြီးမားဆုံးသော ဖျော်ဖြေပွဲကြီးဖြစ်သည်။ 
နယ်သာလန်နိုင်ငံသည် ယူရိုဗားရှင်း သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲသို့ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ထားခဲ့သော နိုင်ငံတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ ထိုပြိုင်ပွဲသည် ၁၉၅၆ ခုနှစ်တွင် စတင်ကျင်းပခဲ့သော ပြိုင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ပြီး လက်ရှိအချိန်အထိ ၅ ကြိမ်အနိုင်ရရှိထားခဲ့ရာ နောက်ဆုံးအကြိမ် အနိုင်ရရှိခဲ့သည်မှာ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ဖြစ်သည်။
ဂန္ထဝင်ဂီတတွင်လည်း Jan Sweelinck ကို ဒတ်ချ်၏ အကျော်ကြားဆုံးသော တေးပြုစာဆိုဟု ခေါ်ဆိုကြပြီး Louis Andriessen ကိုတော့ သက်ရှိထင်ရှား တေးပြုစာဆိုများတွင်တော့ အကောင်းဆုံးဟု ဆိုကြသည်။ Ton Koopman သည် ဒတ်ချ် ဂီတမှူး၊ အော်ဂင်နှင့် harpsichord ပညာရှင်ဖြစ်ပြီး ဟိတ်မြို့ တော်ဝင်ဂီတအကယ်ဒမီမှ ပါမောက္ခတစ်ဦးလည်းဖြစ်သည်။ ထင်ရှားသော တယောပညာရှင်များမှာ Janine Jansen နှင့် André Rieu တို့ဖြစ်ကြပြီး နောက်တွင် ၎င်းတည်ထောင်ထားသော Johann Strauss Orchestra နှင့်တွဲဖက်၍ ဂန္ထဝင်ဂီတနှင့် ဝေါ့ဇ်ဂီတ (Waltz music) တို့ကို ကမ္ဘာအနှံလှည့်လည် ဖျော်ဖြေခဲ့သည်။ ဒတ်ချ်တို့၏ ကျော်ကြားဆုံးသော ဂန္ထဝင်ဂီတတေးသွားမှာ "Canto Ostinato" ဖြစ်ပြီး Simeon ten Holt မှ ရေးဖွဲ့ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။  ချီးကျူးဖွယ်ရာ ဗျပ်စောင်းပညာရှင်မှာ Lavinia Meijer ဖြစ်ပြီး ၂၀၁၂ ခုနှစ်က ထုတ်ဝေခဲ့သော အယ်ဘမ်မှာ Philip Glass ၏ တေးသွားများဖြစ်ပြီး ၎င်း၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် သူမမှ ဗျပ်စောင်းဖြင့်တီးခတ်နိုင်သော တေးသွားများအဖြစ် ပြောင်းလဲခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အမ်စတာဒမ်မြို့ရှိ Concertgebouw (၁၈၈၈ ခုနှစ်တွင် တည်ဆောက်ပြီးစီးခဲ့သော) အဆောက်အဦးသည် တော်ဝင်ဂီတဖျော်ဖြေပွဲများ ကျင်းပရာနေရာဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး အနုလက်ရာများဖြစ်တည်ဆောက်ထားသော ဂီတအဆောက်အဦများထဲမှ တစ်ခုဟု ဆိုကြသည်။
ရုပ်ရှင်နှင့် ရုပ်မြင်သံကြား အစီအစဉ်ပြင်ဆင်
အချို့သော ဒတ်ခ်ျရုပ်ရှင်များ အထူးသဖြင့် Paul Verhoeven ရိုက်ကူးခဲ့သောTurkish Delight ("Turks Fruit", ၁၉၇၃), Soldier of Orange ("Soldaat van Oranje", ၁၉၇၇), Spetters (၁၉၈၀) and The Fourth Man ("De Vierde Man", ၁၉၈၃) စသော ရုပ်ရှင်များသည် နိုင်ငံတကာသို့ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့် အသိအမှတ်ပြုခံရခြင်းတို့ ရရှိခဲ့သည်။ Verhoeven သည် ဆက်လက်၍ ဟောလီးဝုဒ်ရုပ်ရှင်များဖြစ်သည့် RoboCop (၁၉၈၇), Total Recall (၁၉၉၀) နှင့် Basic Instinct (၁၉၉၂) တို့ကို့ရိုက်ကူးခဲ့ပြီး Black Book ("Zwartboek", ၂၀၀၆) ဒတ်ချ်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဖြင့် ဒတ်ချ်ရုပ်ရှင်လောကသို့ ပြန်လည်ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။
အခြား ကျော်ကြားသော ဒတ်ချ်ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာများမှာ Jan de Bont (Speed), Anton Corbijn (A Most wanted Man), Dick Maas (De Lift), Fons Rademakers (The Assault) တို့ဖြစ်ပြီး မှတ်တမ်းရုပ်ရှင် ဖန်တီးသူများဖြစ်ကြသော Bert Haanstra နှင့် Joris Ivens တို့ပါဝင်သည်။ ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ Theo van Gogh သည် ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် ကမ္ဘာသိ ဖြစ်ရပ်ဆိုးဖြင့် ကျော်ကြားသူဖြစ်ပြီး Submission ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတို ရိုက်ကူးပြီးချိန်တွင် အမ်စတာဒမ်လမ်းမပေါ်၌ Mohammed Bouyeri ၏ သတ်ဖြတ်ခြင်းကို ခံခဲ့ရသည်။
နိုင်ငံတကာ အတိုင်းအတာဖြင့် အောင်မြင်မှု ရရှိခဲ့သော နယ်သာလန်နိုင်ငံမှ ရုပ်ရှင်ကင်မရာမန်းများမှာ Hoyte van Hoytema (Interstellar၊ Spectre၊ Dunkirk) နှင့် Theo van de Sande (Wayne's World နှင့် Blade) တို့ဖြစ်သည်။ Van Hoytema မှာ National Film School in Łódź (ပိုလန်) ကျောင်းထွက်ဖြစ်ပြီး Van de Sande မှာ နယ်သာလန် ရုပ်ရှင်အကယ်ဒမီ(Netherlands Film Academy)တွင် သင်ကြားခဲ့သူဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတကာတွင် အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့သော ဒတ်ခ်ျ သရုပ်ဆောင်များမှာ Famke Janssen (X-Men), Carice van Houten (Game of Thrones), Michiel Huisman (Game of Thrones), Rutger Hauer (Blade Runner), Jeroen Krabbé (The Living Daylights) နှင့် Derek de Lint (Three Men andaBaby) တို့ဖြစ်ကြသည်။
နယ်သာလန်နိုင်ငံ၌ ရုပ်မြင်သံကြားဈေးကွက်သည် စီးပွားရေးနှင့် အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ရုပ်သံလွင့်ဌာနများဖြင့် ကောင်းစွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခဲ့သည်။ ပြည်ပရုပ်သံလိုင်းများမှ အစီအစဉ်များ၊ နိုင်ငံခြားဘာသာစကားဖြင့် အင်တာဗျူးများကို မူလအသံအား စာတန်းထိုးဖြင့် ထုတ်လွှင့်သည်။ ကလေးများအတွက် အစီအစဉ်များကိုသာ နိုင်ငံခြားဘာသာစကားနှင့်အသံများမှ မိမိဘာသာစကားသို့ ပြောင်းလဲထုတ်လွှင့်သည်။
နယ်သာလန်မှ ထုတ်လွှင့်သော ရုပ်သံအစီအစဉ်များသည် သီးခြားအစီအစဉ်နှင့် ဖရန့်ချိုင်းပုံစံဖြင့် နိုင်ငံတကာသို့ ထုတ်လွှင့်လျက်ရှိပြီး ဒတ်ခ်ျမီဒီယာ တိုင်ကွန်များဖြစ်ကြသော John de Mol နှင့် Joop van den Ende တို့တည်ထောင်သော Endemol ကော်ပိုရေးရှင်းသည် နိုင်ငံတကာ ရုပ်သံထုတ်လွှင့်မှုတွင် ထင်ရှားသော အစီအစဉ်များဖြင့် ကျော်ကြားသော ရုပ်သံလွှင့်ကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။ Endemol ကုမ္ပဏီ၏ ရုံးချုပ်သည် အမ်စတာဒမ်မြို့၌တည်ရှိပြီး နိုင်ငံပေါင်း ၃၀ ကျော်တွင် ကုမ္ပဏီ ၉၀ ကျော်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ Endemol နှင့် ၎င်း၏ ကုမ္ပဏီခွဲများသည် reality နှင့် talent show၊ ဂိမ်းကစားပွဲများကို တမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် ထုတ်လွှင့်ကြပြီး ထိုရှိုးပွဲများထဲတွင် Big Brother နှင့် Deal or No Deal ကဲ့သို့သော အစီအစဉ်များလည်း ပါဝင်သည်။ နောင်တွင် John de Mol သည် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ကုမ္ပဏီအဖြစ် Talpa ကုမ္ပဏီကို ထူထောင်ခဲ့ပြီး ထိုကုမ္ပဏီမှ The Voice နှင့် Utopia ကဲ့သို့သော ရုပ်သံအစီအစဉ်များကို ပြသခဲ့သည်။
Euro 2012 ပြိုင်ပွဲတွင် ဒိန်းမတ် အမျိုးသား ဘောလုံးအသင်းနှင့် ယှဉ်ပြိုင်ကစားနေသော နယ်သာလန် အမျိုးသား ဘောလုံးအသင်း
နယ်သာလန်နိုင်ငံ၏ ၁၆.၈ သန်းသော လူဦးရေတွင် ၄.၅ သန်းခန့်မှာ နိုင်ငံတဝန်းရှိ အားကစားကလပ် ၃၅,၀၀၀ မှ တခုခုတွင် မှတ်ပုံတင်ထားကြပြီး အသက် ၁၅ နှစ်မှ ၇၅ နှစ်အကြား လူဦးရေ သုံးပုံနှစ်ပုံမှာ အပါတ်စဉ်တိုင်း အားကစား တစ်မျိုးမျိုး ပါဝင်လုပ်ဆောင်ကြသည်။ ဘောလုံးအားကစားသည် နယ်သာလန်နိုင်ငံတွင် ပါဝင်သူအများဖြစ်ပြီး ၎င်းနောက်၌ မြတ်ခင်းပြင် ဟော်ကီ (field hockey) နှင့် ဘောလီဘောတို့သည် ဒုတိယနှင့် တတိယလိုက်သည့် လူကြိုက်များသော အဖွဲ့လိုက်အားကစားများ ဖြစ်သည်။ နယ်သာလန် အမျိုးသား ဘောလုံးအသင်းသည် ဒတ်ခ်ျအားကစားလောကတွင် အကျော်ကြားဆုံးသော ပုံရိပ်လက္ခဏာများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပြီး အထူးသဖြင့် ၁၉၇၀ ခုနှစ်များတွင် သမိုင်းတစ်လျှောက် အကောင်းဆုံးသော ဘောလုံးသမားများထဲက တစ်ယောက်ဖြစ်သော Johan Cruyff သည် ၎င်း၏ နည်းပြဖြစ်သော Rinus Michels နှင့် ပူးပေါင်း၍ Total Football ဟုခေါ်သော နည်းဗျူဟာဖြင့် ကစားခဲ့စဉ်ကတည်းက ဟုဆိုရပေမည်။
အားကစားအဖွဲ့အစည်းများကို ၁၉ ရာစုအကုန် ၂၀ ရာစုအစောပိုင်းတွင် စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး အာကစားဖက်ဒရေးရှင်းများတည်ထောင်ခြင်း၊ စည်းကမ်းများ သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် အားကစားကလပ်များ ပေါ်ထွန်းလာခဲ့သည်။ ဒတ်ချ် အမျိုးသား အိုလံပစ် ကော်မတီအား ၁၉၁၂ ခုနှစ်တွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ယခုအချိန်မတိုင်မှီအထိ နယ်သာလန်နိုင်ငံသည် ​နွေရာသီ အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲတွင် ဆုတံဆိပ် ၂၆၆ ခု၊ ​ဆောင်းရာသီ အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲတွင် ဆုတံဆိပ် ၁၁၀ ခု ရရှိခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲများတွင် ဒတ်ချ် နိုင်ငံ့အသင်းနှင့် အားကစားသမားများသည် များစွာ​သော အားကစားနယ်ပယ်များတွင် ​အောင်မြင်မှုများစွာ ရရှိခဲ့ကြသည်။ ကမ္ဘာ့ဖလားသမိုင်းတွင် ဒတ်ချ်အမျိုးသမီး ​မြတ်ခင်းပြင်​ဟော်ကီအသင်းသည် ​အ​အောင်မြင်ဆုံး​သော အသင်းဖြစ်သည်။ နယ်သာလန် ​ဘေ့စ်​ဘောအသင်းသည် ဥ​ရောပ ချန်ပီယံရှစ်ပြိုင်ပွဲ ၃၂ ပွဲတွင် အကြိမ် ၂၀ မျှ ဗိုလ်စွဲခဲ့​သော အသင်းလည်း ဖြစ်သည်။ ဒတ်ချ် K-1 kickboxers သည်လည်း K-1 World Grand Prix ပွဲ ၁၉ခုတွင် ၁၅ ကြိမ်မျှ ဖလားရရှိခဲ့သည်။
၂၀၁၄ ခုနှစ် ​ဆောင်းရာသီ အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲတွင် ဒတ်ချ် speed skater အသင်းဝင်​ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ရာ ပြိုင်ပွဲ ၁၂ ခုတွင် ၈ ခု၊ ဆုတံဆိပ် ၃၆ ခုတွင် ၂၃ ခုရရှိခဲ့ပြီး ထိုအထဲမှပြိုင်ပွဲ ၄ ခုမှာ ပြတ်ပြတ်သားသား အနိုင်ရခဲ့ခြင်းဖြစ်သည့်အတွက်​ကြောင့် အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲသမိုင်းတွင် အားကစားတမျိုးထဲ၌ အကြီးကျယ်ဆုံး​သော ​အောင်မြင်မှုရရှိခြင်း ဖြစ်သည်။ ​​မော်​တော်ဆိုင်ကယ်ပြိုင်ပွဲဖြစ်​သော TT Circuit Assen တွင်လည်း ရှည်လျားလှ​သော သမိုင်း​ကြောင်းများရှိ၍​နေသည်။ Assen သည် သည် ​မော်​တော်ဆိုင်ကယ် ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံရှစ် စတင်ကျင်းပခဲ့စဉ် ၁၉၄၉ ခုနှစ်ကတည်းက ပြိုင်ပွဲကျင်းပခဲ့​နေရာလည်း ဖြစ်သည်။ Dutch TT အတွက် ပတ်လမ်းများကို တည်​​ဆောက်ရန် အဆိုပြုခဲ့သည်မှာ ၁၉၅၄ ခုနှစ်တွင်ဖြစ်ပြီး ထို့မတိုင်မှီက အများပြည်သူ့လမ်းများတွင် ကျင်းပခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ခရီးရှည် စက်ဘီးပြိုင်ပွဲကြီးဖြစ်သည့် 1968 Tour de France ပြိုင်ပွဲတွင် Jan Janssen အနိုင်ရရှိခဲ့ခြင်း၊ Joop Zoetemelk မှ 1985 UCI Road World Championship အနိုင်ရရှိခြင်း၊ မကြာ​သေးမှီက 2017 Giro d'Italia ပြိုင်ပွဲတွင် Tom Dumoulin အနိုင်ရရှိတို့​ကြောင့် နယ်သာလန်သည် ခရီးရှည်စက်ဘီးစီးပြိုင်ပွဲကြီး ၃ ခုတွင် ​အောင်မြင်မှုရရှိထား​သော နိုင်ငံဖြစ်သည်။ ဂန္ထဝင် စက်ဘီးစီးသမားကြီးဖြစ်သူ Joop Zoetemelk သည် 1979 VueltaaEspana နှင့် 1980 Tour de France ပြိုင်ပွဲများတွင် အနိုင်ရရှိထားသူဖြစ်ပြီး Tour de France ပြိုင်ပွဲတွင် စံချိန်များစွာ ချိုးထားသူဖြစ်သည်။
လက်ရှိဖော်မြူလာ ဝမ်းတွင် ပြိုင်ပွဲဝင်​နေ​သော Max Verstappen သည် Grand Prix ရရှိခဲ့​သော ပထမဆုံး​သော ဒတ်ချ်လူမျိုးဖြစ်သည်။ ၁၉၅၈ ခုနှစ်မှ၁၉၈၅ ခုနှစ်ထိ Dutch Grand Prix ကို ကျင်းပခဲ့​သော Zandvoort ကမ်း​ခြေမြို့တွင် ပြိုင်ပွဲများအား ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် ပြန်လည်ကျင်းပမည် ​ကြေညာခဲ့သည်။ ဒတ်ချ်အမျိုးသား ​ဘောလုံးအသင်းသည် ​အောင်မြင်မှုများ ရရှိခဲ့​သော အသင်းဖြစ်ပြီး ၁၉၉၂ ​နွေရာသီ အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲတွင် ​ငွေတံဆိပ်၊ မကြာ​သေးမီနှစ်များက အတ္တလန္တာမြို့တွင် ကျင်းပခဲ့​သော ၁၉၉၆​ နွေရာသီ အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲတွင် ​ရွှေတံဆိပ် ရရှိခဲ့သည်။ ​အောင်မြင်မှု ကြီးကြီးမားမား ရရှိခဲ့သည်မှာ အမျိုးသမီး ​ဘောလီ​ဘောအသင်းဖြစ်ပြီး ၁၉၉၅ ခုနှစ်တွင် ဥ​ရောပချန်ပီယံရှစ်၊ ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် World Grand Prix ရရှိခဲ့သည်။
၁၆၆၄ ခုနှစ်တွင် နယူးအမ်စတာဒမ်မြို့ အဖြစ်တည်​ထောင်ခဲ့ပြီး ဗြိတိသျှတို့အုပ်ချုပ်​သောကာလအ​ရောက်တွင် နယူးယောက်မြို့အဖြစ် ​ခေါ်ဆိုခဲ့သည်။
၁၇ ရာစု မဂိုအင်ပါယာအား ​အနိုင်ကျင့်အမြတ်ထုတ်ချိန်မှ ၁၉ ရာစု ကိုလိုနီပြုချိန်ထိ ၂၀ ရာစုအ​စောပိုင်း ဒတ်ချ်အရှေ့အင်ဒီးနယ်၏ လွမ်းမိုးမှုထူ​ထောင်နိုင်ခြင်းဖြင့် ဒတ်ချ်အ​င်ပါယာ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများသည် ကျယ်ပြန့်လာပြီး ၎င်းတို့၏အကြီးမြတ်ဆုံး​သော အချိန်သို့​ရောက်လာခဲ့သည်။ ယ​နေ့​​ခေတ် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဖြစ်လာသည့် ဒတ်ချ်အ​ရှေ့အင်ဒီးနယ်သည် ကမ္ဘာ​ပေါ်ရှိ တန်ဖိုးကြီးမား​သော ဥ​ရောကိုလိုနီနယ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်ပြီး နယ်သာလန်အတွက် အလွန်အ​ရေးပါဆုံး​သော နယ်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ နှစ် ၃၅၀ ​ကျော် ကြာခဲ့​သော ယဉ်ကျေးမှုများသည် နယ်သာလန်နိုင်ငံတွင် ထင်ရှား​သော ယဉ်ကျေးမှုအမှတ်လက္ခဏာများအဖြစ် ကျန်ရှိခဲ့သည်။
၁၇ ရာစု ဒတ်ချ် ​ရွှေ​ခေတ်အ​ရောက်တွင် အာရှကုန်သွယ်​ရေး လက်ဝါးကြီးအုပ်မှုတို့မှ ရရှိလာ​သော ဘဏ္ဍာ​​ငွေရရှိမှုတို့မှ နယ်သာလန်သည် မြို့ပြအသွင်​ပြောင်းလဲ​ရေး အ​တော်ကို​ ​ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သည်။ ကုန်သည်တို့၏ ဝင်​ငွေ​ပေါ် မှီတည်​နေ​သော လူမှုအ​ခြေအ​နေသည် ​မြေရှင်ပ​ဒေသရာဇ်စနစ်ကို ​လျော့ချနိုင်ခဲ့ပြီး ဒတ်ချ်လူမှုအဖွဲ့အစည်း၏အ​ရွေ့ကို ​ပြောင်းလဲ​စေခဲ့သည်။ ၁၈၁၅ တွင် ဒတ်ချ်​တော်ဝင်မိသားစုအား ထူ​ထောင်နိုင်ခဲ့ပြီး ၎င်းတို့၏ကြွယ်ဝမှုအများစုသည် ကိုလိုနီကုန်သွယ်မှုမှ ရရှိခဲ့သည်။ 
၁၇ ရာစုအ​ရောက်တွင် ဒတ်ချ်အ​ရှေ့အိန္ဒိယကုမ္ပဏီသည် ၎င်းတို့၏ အ​ခြေစိုက်စခန်းကို စီလုံ (ယ​နေ့​ခေတ် သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ)တွင် တည်​ထောင်နိုင်ခဲ့သည်။ ​နောက်တွင် ဒတ်ချ်တို့သည် မလဘာကိုသိမ်းပိုက်ပြီး ကုန်သွယ်​ရေးစခန်းတည်​ထောင်နိူင်ခဲ့ကာ အိန္ဒိယတွင် အ​ခြေ​ချ​နေရာနှင့် ကုန်သွယ်​ရေးစခန်းများတည်​ထောင်ခြင်းကို ​ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။ သို့​ပေ​သော်ငြား တြာဗန်ကိုနိုင်ငံ(Kingdom of Travancore)နှင့် ဖြစ်ပွား​သော ကိုလာချယ်တိုက်ပွဲ(Battle of Colachel)တွင် ရှုံးနိမ့်ခဲပြီး အိန္ဒိယသို့ နယ်ချဲ့ခြင်း ရပ်တန့်သွားခဲ့သည်။ ဒတ်ချ်တို့သည် ထိုသို့​သော ရှုံးနိမ့်မှုမှ မကုစားနိုင်​တော့ပဲ ဘန်​ဂေါနယ်တွင် ကိုလိုနီပြု စခန်းချခြင်းများကို ဆက်လက်​ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း မရှိ​တော့​ချေ။
၁၆ ရာစုနှစ်တွင် တည်​ထောင်ခဲ့​သော ​လေဒင့်တက္ကသိုလ်ကဲ့သို့ တက္ကသိုလ်များတွင် အင်ဒိုနီးရှားနှင့် အရှေ့တောင်အာရှလေ့လာရေးဌာနများ ​ပေါ်ထွန်းလာခဲ့သည်။ ​[မှတ်စု ၁၃] လေဒင့်တက္ကသိုလ်မှ Christiaan Snouck Hurgronje ကဲ့သို့ ပညာရှင်များ ​မွေးထုတ်​ပေးနိုင်ခဲ့ပြီး အင်ဒိုနီးရှားဘာသာစကားနှင့် ယဉ်​ကျေးမှုကို အထူးပြု​လေ့လာကြသူများ ယခုထက်တိုင်​အောင် ရှိ​သေးသည်။ ​လေဒင့်တက္ကသိုလ် အထူးသဖြင့် အ​ရှေ့​တောင်အာရှနှင့် ကာရစ်ဘီယံ​လေ့လာ​ရေး နယ်သာလန်​ တော်ဝင်အင်စတီကျူ(KITLV)များသည် ယ​နေ့အချိန်ထိတိုင်​အောင် အင်ဒိုနီးရှား​လေ့လာ​ရေးတွင် ဉာဏနှင့် သမိုင်းဆိုင်ရာလေ့လာမှုများအတွက် ပညာရေးဆိုင်ရာ နေရာများအဖြစ် ရှိ၍နေသည်။ နယ်သာလန်နိုင်ငံ၌ အခြားလေ့လာနိုင်သေးသော နေရာများမှာ အမ်စတာဒမ်ရှိ မနုဿဗေဒဆိုင်ရာ Tropenmuseum ပြတိုက်ဖြစ်ပြီး အင်ဒိုနီးရှား အနုပညာ၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ လူမျိုးခွဲ‌ဗေဒ၊ မနုဿဗေဒနှင့်ဆိုင်သော များပြားလှစွာသော စုဆောင်းမှုများ ရှိ၍နေသည်။
ဒတ်ချ်ဆရာဝန်မှ ဒေသခံအင်ဒိုနီးရှားအမျိုးသမီးအား ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးနေပုံ
တော်ဝင်ဒတ်ချ်အရှေ့အင်ဒီးတပ်(KNIL)အား အစဉ်အလာထိန်းသိမ်းသောအားဖြင့် Van Heutsz တပ်ရင်းအဖြစ် တော်ဝင်နယ်သာလန်တပ်မတော်တွင် ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ KNIL မှ အနားယူခဲ့သော စစ်မှုထမ်းဟောင်းများအတွက် နေရာဖြစ်သော ဘရွန်ဘက်နန်းတော်ပြတိုက်(Bronbeek Museum)သည် Arnhem မြို့တွင် ယနေ့ထက်တိုင် တည်ရှိနေ‌သည်။
ဒတ်ချ်စာ​ပေတွင် ဒတ်ချ်အင်ဒီးစာ​ပေဟု​ခေါ်​သော အ​ရေးပါ​သော အစိတ်အပိုင်း တည်ရှိ​နေပြီး ၎င်းစာ​ပေအမျိုးအစားတွင် ကိုလိုနီ​ခေတ်အား ကွန့်မြူးစရာအ​ရေးပါ​သောအရာဌာနအဖြစ် ဖြစ်​စေခဲ့​သော "The Hidden Force " အား​ရေးသားသူ Louis Couperus တို့ပါဝင်သည်။ ဒတ်ချ်စာ​ပေ၏ လက်ရာမွန်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်​သော "Max Havelaar" အား ၁၈၆၀ ခုနှစ်တွင် Multatuli မှ ​ရေးသားခဲ့သည်။
အင်ဒိုနီးရှားဟင်းလျာနှင့် စား​သောက်ကုန်များကို နယ်သာလန်နိုင်ငံ၌ အလွယ်တကူရရှိနိုင်သည်။ ကိုလိုနီ​ခေတ်လက်ရာလွှမ်း​နေ​သော Rijsttafel၊ Nasi goreng နှင့် ဆာတေး ကဲ့သို့​သော ဟင်းလျာများသည် နိုင်ငံတွင်း လူကြိုက်များ​သော ဟင်းလျာများ ဖြစ်သည်။ နယ်သာလန်နိုင်ငံအတွင်းရှိ မည်သည့်မြို့တွင်မဆို မြို့အရွယ်အစား မည်မျှရှိသည်ဖြစ်​စေ ""တိုကို(toko)ဟု​ခေါ်​သော ဒတ်ချ်-အင်ဒိုနီးရှားဆိုင် သို့မဟုတ် တရုတ်-အင်ဒိုနီးရှားဆိုင် ရှိ၍​နေသည်။ ထို့ပြင် 'ပါဆာ မာလန်(Pasar Malam)ဟု​ခေါ်​သော ည​ဈေးပွဲ​တော်များကို တနှစ်ပတ်လုံး ဖွင့်လှစ်ကြသည်
↑ ၁.၀ ၁.၁ အမ်စတာဒမ်မြို့သည် ဖွဲ့စည်းပုံအရ မြို့တော်ဖြစ်သော်လည်း အစိုးရအဖွဲ့နှင့် တော်ဝင်မိသားစုသည် ဟိတ်မြို့တော်တွင် ရုံးစိုက်ကြသည်။
↑ ဒတ်ချ်ဘာသာအပြင် အထူးမြူနီစပါယ်ဒေသများဖြစ်သော ဆာဘာကျွန်းနှင့် စိန့်ယူထရေးရှပ်ကျွန်းတို့တွင် ရုံးသုံးဘာသာစကားမှာ အင်္ဂလိပ်ဘာသာ၊ ဘာနေယားကျွန်းတွင် ရုံးသုံးဘာသာစကားမှာ Papiamentu ဘာသာစကားဖြစ်ပြီး အနောက်ဖရီရှန်းဘာသာစကားကို ဖရီစ်လန်းပြည်နယ်တွင် ရုံးသုံးဘာသာစကားအဖြစ် အသုံးပြုသည်။ 
↑ Having ratified the European Charter for Regional or Minority Languages in 1996, the Dutch government recognises Dutch Low Saxon, Limburgish, Sinte Romani and Yiddish as regional or non-territorial minority languages.
↑ ယူရိုကို နယ်သာလန်နိုင်ငံ၏ ဥရောပအခြမ်းတွင် သုံးစွဲခြင်းဖြစ်ပြီး ဒတ်ချ်ဂီဒါအစား ၂၀၀၂ ခုနှစ်တွင် အစားထိုးသုံးစွဲခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အမေရိကန်ဒေါ်လာကို ကာရစ်ဘီယံနယ်သာလန်တွင် သုံးစွဲခြင်းဖြစ်ပြီး နယ်သာလန် အန်တီလီယန်းဂီဒါအစား ၂၀၁၁ တွင် အစားထိုးခဲခြင်းဖြစ်ပြီးသည်
↑ .nl သည် နယ်သာလန်နိုင်ငံအတွက် ယေဘုယျ အင်တာနက် ထိပ်ဆုံးဒိုမိန်းအမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် .eu ဒိုမိန်းကိုလည်း အခြားသော ဥရောပသမဂ္ဂနိုင်ငံများနှင့် မျှဝေအသုံးပြုသည်။ .bq ကို ကာရစ်ဘီယံနယ်သာလန်အတွက် သတ်မှတ်ထားသော်ငြား အသုံးပြုခြင်း မရှိကြပေ။
↑ Provided statistics show Protestants by their allegiance to congregations of two denominations that do not exist anymore. In 2004, the Dutch Reformed Church (NHK), the Reformed Churches in Netherlands (GKN) and the Evangelical Lutheran Church in the Kingdom of the Netherlands merged to form the Protestant Church in the Netherlands (PKN) and officially no longer exist. However, many people still tend to give their older affiliation even after the merger. People who declared themselves simply as belonging to the Protestant Church in the Netherlands did not give an information about belonging to an older affiliation. For example, Members of the former Evangelical Lutheran Church in the Kingdom of the Netherlands happened to do so. People who identified with one of those three categories (NHK/GKN/or simply PKN) are all members of the Protestant Church in the Netherlands.
↑ Including other Protestants that are not members of the Protestant Church in the Netherlands.
↑ ၁.၀ ၁.၁ Welke erkende talen heeft Nederland? (in Dutch)။ Rijksoverheid (11 January 2016)။ ၅ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၂.၀ ၂.၁ Oppervlakte။
↑ Zaken၊ Ministerie van Algemene (19 May 2015)။ Waaruit bestaat het Koninkrijk der Nederlanden? – Rijksoverheid.nl။
↑ Bevolkingsteller (in Dutch)။9June 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Dutch Census 2011 Analysis and Methodology။ Statistics Netherlands (19 November 2014)။9June 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၆.၀ ၆.၁ ၆.၂ ၆.၃ Netherlands။ International Monetary Fund (April 2019)။
↑ Human Development Report 2019 (PDF) (in en)။ ကုလသမဂ္ဂ ဖွံ့ဖြိုးမှု အစီအစဉ် (10 December 2019)။ 30 April 2020 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ ၅ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Wet geldstelsel BES။ Dutch government (30 September 2010)။ ၅ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Time Zone & Clock Changes in Amsterdam, Netherlands (in en)။ ၅ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (in Dutch)။ Government of the Netherlands (17 November 2017)။ ၃ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Netherlands vs. Holland။ Netherlands Bureau for Tourism and Congresses (18 October 2012)။ ၃ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Netherlands boundaries in the North Sea။ Ministry of Defence။ 19 August 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ ၃ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Gemeentelijke indeling op 1 januari 2019 (in Dutch)။ CBS Classifications။ Statistics Netherlands (CBS)] (1 January 2019)။ ၂၉ ဩဂုတ် ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ De waterschappen (in Dutch)။3November 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ ၂၉ ဩဂုတ် ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ 31.954, Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (in Dutch)။ Eerste kamer der Staten-Generaal။ ၂၉ ဩဂုတ် ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ “De openbare lichamen vallen rechtstreeks onder het Rijk omdat zij geen deel uitmaken van een provincie.
"Through the establishment of the BES islands as public bodies, rather than communities, the BES islands' rules may deviate from the rules in the European part of the Netherlands. The Dutch legislation will be introduced gradually. The public bodies fall directly under the central government because they are not part ofaprovince."”
↑ Baarle-Hertog and Baarle Nassau။
↑ ၁၈.၀ ၁၈.၁ ၁၈.၂ ကိုးကား အမှား - Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named auto
↑ ၁၉.၀ ၁၉.၁ Ministerie van Algemene Zaken (19 May 2015)။ Waaruit bestaat het Koninkrijk der Nederlanden?။
↑ KCT. Official website of the Dutch Commando Foundation Archived5February 2011 at the Wayback Machine.. Korpscommandotroepen.nl (14 April 2010). Retrieved on 21 August 2012.
↑ Ministerie van defensie – Werken bij Defensie။ Mindef.nl။ 11 August 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ ၅ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Defensie hard getroffen door bezuinigingen။ Ministry of Defence။7August 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ ၅ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Red Cross urges Netherlands to sign UN nuclear weapons ban"၊ NL Times၊ 11 February 2019။
↑ Wayback Machine (4 June 2017)။ ၉ ဇွန် ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ The World Factbook။ 22 April 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Inflation up to 2.8 percent။ Statistics Netherlands (6 June 2013)။ ၉ ဇွန် ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Unemployment further up။ Statistics Netherlands (15 May 2013)။ ၉ ဇွန် ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ More employed in February (21 February 2019)။ ၉ ဇွန် ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Amsterdam en de wereld: Toerisme en congreswezen။ 15 February 2009 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ ၁၉ ဇွန် ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။. ez.amsterdam.nl
↑ Kreijger၊ Gilbert။ "Dutch allow Wilders' anti-Pole website, EU critical"၊ Reuters၊ 10 February 2012။ 19 June 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 21 November 2015။
↑ Global Competitiveness Report 2012–2013။ World Economic Forum (5 September 2012)။ 10 December 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ ၁၉ ဇွန် ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၃၃.၀ ၃၃.၁ The Dutch curse: how billions from natural gas went up in smoke Archived 21 December 2016 at the Wayback Machine. LEES MEER, 17 June 2009
↑ The Groningen Gas Field။ GEO ExPro Magazine (2009)။ 19 October 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ ၂၇ ဇွန် ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Energy Policies of IEA Countries။ International Energy Agency။5July 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 27 June 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ The Agreement on Energy for Sustainable Growth။ SER။
↑ Energy Policies။ IEA။5July 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 27 June 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၃၉.၀ ၃၉.၁ The hunt for gas and oil reserves that are more difficult to extract။ EBN။7September 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ Netherlands Energy System Overview။ IEA။ 27 December 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 27 June 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Energy Agreement for Sustainable Growth။ International Energy Agency။[လင့်ခ်သေ]
↑ ၄၂.၀ ၄၂.၁ National Energy Outlook 2017။ Energy Research Center of the Netherlands။
↑ Energy support measures and their impact on innovation။ European Environmental Agency။
↑ European Energy Market Reform။ Deloitte။
↑ Factsheet Agri-food : Holland isaworld-leading supplier of sustainable, healthy, agri-food products။ ၇ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ကိုးကား အမှား - Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named hollandtrade.com
↑ "Farming in the Netherlands: Polder and wiser"၊ Sevenum: The Economist Group၊ 23 August 2014။ ၇ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Dutch agricultural exports top 80 billion Euros (16 January 2015)။
↑ Ministerie van Landbouw၊ Natuur en Voedselkwaliteit (17 January 2020)။ Dutch agricultural exports worth €94.5 billion in 2019 - News item - Government.nl။
↑ ၅၀.၀ ၅၀.၁ Netherlands: Agricultural situation။ USDA Foreign Agriculture Service။ 19 June 2007 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ ၇ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "SWOV Fact sheet" (PDF) (သတင်းထုတ်ပြန်ချက်)။ Leidschendam, the Netherlands: SWOV, Dutch Institute for Road Safety Research။ July 2013။ 15 April 2010 တွင် မူရင်း (PDF) အား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ ၁၀ ​မေ ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Text "Mobility on Dutch roads" ignored (အကူအညီ); zero width space character in |accessdate= at position4(အကူအညီ); |accessdate= ရှိ ရက်စွဲတန်ဖိုး စစ်ဆေးရန် (အကူအညီ)
↑ ၅၂.၀ ၅၂.၁ ၅၂.၂ ၅၂.၃ Waard၊ Jan van der; Jorritsma၊ Peter; Immers၊ Ben (October 2012)။ New Drivers in Mobility: What Moves the Dutch in 2012 and Beyond? (PDF) (အစီရင်ခံစာ)။ Delft, the Netherlands: Organisation for Economic Co-operation and Development International Transport Forum။ 17 January 2013 တွင် မူရင်း (PDF) အား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ ၁၀ ​မေ ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ zero width space character in |accessdate= at position4(အကူအညီ); |accessdate= ရှိ ရက်စွဲတန်ဖိုး စစ်ဆေးရန် (အကူအညီ)
↑ CIA World Factbook။ U.S. Central Intelligence Agency (2012)။ ၁၀ ​မေ ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Road density (km of road per 100 sq. km of land area)။ The World Bank Group (2014)။ ၂၀ ​မေ ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Toor၊ Amar (10 July 2013)။ Every Dutch citizen will live within 31 miles of an electric vehicle charging station by 2015။ The Verge။ Vox Media, Inc။ 11 July 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ CIA World Factbook။ U.S. Central Intelligence Agency (2012)။ ၁၇ ​မေ ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "NS to up frequency of Amsterdam to Eindhoven trains to six an hour - DutchNews.nl" (in en-GB)၊ DutchNews.nl၊ 21 June 2017။
↑ (RVO)၊ Netherlands Enterprise Agency (17 July 2015)။ Holland Publications။ hollandtrade.com။ ၁၇ ​မေ ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Cycling in the Netherlands။
↑ CBS StatLine – Motor vehicles; general overview per period and technological features။
↑ European Cyclists' Federation – The first EU wide ECF Cycling Barometer launched။ 14 July 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ Quality of Transport report (PDF) (အစီရင်ခံစာ)။ European Commission။ December 2014။ p. 11။ 8 September 2015 တွင် မူရင်းမှ မော်ကွန်းတင်ပြီး (PDF) ။ ၁၇ ​မေ ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Cite has empty unknown parameter: |coauthors= (အကူအညီ); zero width space character in |accessdate= at position4(အကူအညီ); |accessdate= ရှိ ရက်စွဲတန်ဖိုး စစ်ဆေးရန် (အကူအညီ)
↑ "Why is cycling so popular in the Netherlands?"၊ BBC News။
↑ Future of Transport report (PDF) (အစီရင်ခံစာ)။ European Commission။ March 2011။ p. 8။5February 2015 တွင် မူရင်းမှ မော်ကွန်းတင်ပြီး (PDF) ။ ၁၇ ​မေ ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ zero width space character in |accessdate= at position4(အကူအညီ); |accessdate= ရှိ ရက်စွဲတန်ဖိုး စစ်ဆေးရန် (အကူအညီ)
↑ CROW Fietsberaad။ 17 July 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ ၁၇ ​မေ ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Port of Rotterdam Statistics 2013။ Port of Rotterdam။ ၁၇ ​မေ ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Bijna 64 miljoen—zo veel passagiers zag Schiphol nog nooit – NOS (in Dutch)။ Nederlandse Omroep Stichting (9 January 2017)။9January 2017 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ ၁၇ ​မေ ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၆၉.၀ ၆၉.၁ ၆၉.၂ ၆၉.၃ ၆၉.၄ The World Factbook – Netherlands။ Central Intelligence Agency။ ၁၈ မေ ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Max Roser (2014)၊ "Total Fertility Rate around the world over the last centuries"၊ Our World In Data, Gapminder Foundation၊7August 2018 တွင် မူရင်း အား မော်ကွန်းတင်ပြီး၊ ၂၀ မေ ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး
↑ Garssen, Joop, Han Nicolaas and Arno Sprangers (2005)။ Demografie van de allochtonen in Nederland (in Dutch)။ Centraal Bureau voor de Statistiek။ ၂၀ မေ ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Expats in Nederland။ 19 October 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။
↑ Feiten en cijfers over immigratie – Pagina 5။ Ons Amsterdam။ 18 June 2018 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 20 May 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Enserink၊ Martin။ "Did natural selection make the Dutch the tallest people on the planet?"၊7April 2015။
↑ Reported health and lifestyle။ Centraal Bureau voor de Statistiek။ ၂၀ ​မေ ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Vasileva, Katya (2011) 6.5% of the EU population are foreigners and 9.4% are born abroad Archived 28 January 2012 at the Wayback Machine., Eurostat, Statistics in focus vol. 34.
↑ American FactFinder, United States Census Bureau။ Census 2006 ACS Ancestry estimates။ Factfinder.census.gov။ 28 April 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ ၃၀ ​မေ ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Dutch colonialism, migration and cultural heritage Archived 28 April 2011 at the Wayback Machine. (PDF). Royal Netherlands Institute of Southeast Asia and Caribbean Studies.
↑ CBS Statline။
↑ CBS – Income distribution – Extra။ 30 September 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ ၂၉ မေ ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၈၅.၀ ၈၅.၁ ကိုးကား အမှား - Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named cbs2016
↑ Schmeets၊ Hans; Mensvoort၊ Carly van (2011)။ Religieuze betrokkenheid van bevolkingsgroepen, 2010–2014 (PDF)။ Centraal Bureau voor der Statistiek။ 21 February 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၈၇.၀ ၈၇.၁ "Hoe God (bijna) verdween uit Nederland"၊ NOS၊ 13 March 2016။ ၁၆ ဩဂုတ် ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၈၈.၀ ၈၈.၁ Bernts၊ Tom; Berghuijs၊ Joantine (2016)။ God in Nederland 1966-2015။ Ten Have။ ISBN 9789025905248။
↑ "Two-thirds of people in Netherlands have no religious faith" (in en-GB)၊ DutchNews.nl၊ 14 March 2016။
↑ Feestdagen Nederland။ Beleven.org။ ၁၆ ဩဂုတ် ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Ongelovigen halen de gelovigen in"၊ Dossier Relige၊ der Verdieping Trouw၊ 16 January 2015။ ၁၈ ဩဂုတ် ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Kerkelijke gezindte en kerkbezoek; vanaf 1849; 18 jaar of ouder"၊ 15 October 2010။
↑ Een op de zes bezoekt regelmatig kerk of moskee။ Central Bureau of Statistics, Netherlands (2012)။ ၁၈ ဩဂုတ် ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Godsdienstige veranderingen in Nederland။ 25 January 2007 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ ၁၈ ဩဂုတ် ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Leerplicht (11 December 2009)။ ၆ ဇွန် ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Leerplicht en kwalificatieplicht (February 2017)။ ၆ ဇွန် ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Health Consumer Powerhouse။ healthpowerhouse.com။ ၂၃ ဇူလိုင် ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "U.S. scores dead last again in healthcare study"၊ Reuters၊ 23 June 2010။
↑ Toward Higher-Performance Health Systems: Adults' Health Care Experiences In Seven Countries, 2007။
↑ Health Consumer Powerhouse – Health Care System's Indexes and reports။
↑ ၁၀၅.၀ ၁၀၅.၁ ၁၀၅.၂ Zorgrekeningen; uitgaven (in lopende en constante prijzen) en financiering (in Dutch)။ Centraal Bureau voor de Statistiek: StatLine (20 May 2010)။ ၁၄ ဩဂုတ် ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Sport၊ Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en (18 February 2010)။ Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport။ minvws.nl။ ၁၄ ဩဂုတ် ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Same-Sex Marriage Legalized in Amsterdam"၊ CNN၊ 1 April 2001။ ၂၀ ဧပြီ ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on3March 2016။
↑ Fossil CO2 emissions of all world countries - 2018 Report။ EU Science Hub (2018)။ ၁၅ ဧပြီ ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ IAMEXPAT News။
↑ "Arcadis Sustainable Cities Index Report"၊ 2015။
↑ Arcadis Sustainable Cities Index။
↑ ၁၁၂.၀ ၁၁၂.၁ Sustainable enterprise | RVO.nl။
↑2Unlimited။ ၂၀ ဧပြီ ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Amsterdam Dance Event။ local-life.com။
↑ The international Dance industry assembles in Amsterdam next week။ Dutch Daily News (12 October 2012)။
↑ Canto Ostinato by Simeon ten Holt။
↑ international Archives » Page2of3» Andre Rieu။
↑ Top 25 Tours of 2009။ Billboard (11 December 2009)။
↑ Chicago Symphony Tops U.S. Orchestras။ NPR.org (21 November 2008)။
↑ Webcasting Worldwide: Business Models of an Emerging Global Medium. Routledge; 2013. ISBN 978-1-135-24977-9. p. 101–103.
↑ Sport in Nederland (in nl)။ 25 September 2008 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ ၂၆ ဧပြီ ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ . ned.univie.ac.at
↑ Ledental sportbonden opnieuw gestegen (in nl) (24 July 2006)။ 12 August 2007 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ ၂၆ ဧပြီ ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Zandvoort secures F1 return as Dutch GP venue (14 May 2019)။ ၁​ ​မေ ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Hart, Jonathan (2008)။ Empires and Colonies။ Polity။ pp. 201–။ ISBN 978-0-7456-2614-7။ ၅ ​မေ ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ zero width space character in |accessdate= at position3(အကူအညီ); |accessdate= ရှိ ရက်စွဲတန်ဖိုး စစ်ဆေးရန် (အကူအညီ)
↑ အမှန်​တော့ ယ​နေ့ထိ ဒတ်ချ်​တော်ဝင်မိသားစု နယ်သာလန်နိုင်ငံ၌ အချမ်းသာဆုံးမိသားစုဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့ကြွယ်ဝမှု၏အ​ခြေခံအ​ကြောင်းတစ်ခုမှာ ကိုလိုနီ​ခေတ်ကုန်သွယ်​ရေးဖြစ်သည်။"In Pictures: The World's Richest Royals"၊ Forbes၊ 30 August 2007။ ၅ ​မေ ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Koshy၊ M. O. (1989)။ The Dutch Power in Kerala, 1729–1758။ Mittal Publications။ p. 61။ ISBN 978-81-7099-136-6။
↑  Archived 12 March 2016 at the Wayback Machine. 9th Madras Regiment
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=နယ်သာလန်နိုင်ငံ&oldid=709654" မှ ရယူရန်
၁၈ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၂:၄၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၁၈ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၂:၄၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။